ကာတာ နိုင်ငံ သည် အနောက် အာရှတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အာရပ် ကျွန်းဆွယ်ကြီး၏ အရှေ့ မြောက်ဘက်တွင် ရှိသော ကာတာ ကျွန်းဆွယ်လေး ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ကုန်းတွင်းနယ်နိမိတ်အားဖြင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ နှင့် တောင်ဘက်တွင် ထိစပ်လျှက် ရှိပြီး ကျန်ရှိသော နယ်နိမိတ်များမှာ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့က ဝန်းရံလျှက် ရှိသည်။ အနီးအနားရှိ ကျွန်းနိုင်ငံ ဖြစ်သော ဘာရိန်းနိုင်ငံ နှင့် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ ရေလက်ကြားက ပိုင်းခြားထားသည်။
နိုင်ငံတော် သီချင်း: As-salām al-amīrī
ဟာမက် ဘင် ခါလီဖာ အယ်လ် သာနီ
• အိမ်ရှေ့ မင်းသား
တာမင် ဘင် ဟာမက် အယ်လ်သာနီ
• ရှိတ်ဘုရင်မှ ထူထောင်ခြင်း
၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၈၇၈
• လွတ်လပ်ရေး (အိုတိုမန်အင်ပိုင်ယာမှ)
စက်တင်ဘာ ၃ ၊ ၁၉၇၁
၁၁,၄၃၇km² (၄,၄၁၆sq mi) (အဆင့်: ၁၆၄)
၁,၆၉၆,၅၆၃ (အဆင့် - ၁၄၈)
၁၂၃.၂/km² (၃၁၉.၁/sq mi) (အဆင့် - ၁၂၃)
အလွန်မြင့် · ၃၈
အော့တမန်အင်ပိုင်ယာ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိခဲ့ပြီးနောက် ၂၀ရာစု အစောပိုင်းတွင် ကာတာတို့သည် ဗြိတိသျှတို့၏ အစောင့်အရှောက်ခံနယ်မြေအဖြစ် ရှိခဲ့သည်မှာ ၁၉၇၁ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရသည် အထိပင် ဖြစ်သည်။ ကာတာနိုင်ငံအား သာနီမိသားစုမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်မှာ ၁၉ ရာစု အစောပိုင်းမှပင် စခဲ့သည်။ ရှိတ်စော်ဘွား ဂျာဆင်ဘင်မိုဟာမက်အယ်လ်သာနီသည် ကာတာနိုင်ငံကို ထူထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ကာတာသည် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဆက်ခံရသော ဘုရင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး နိုင်ငံ၏ အကြီးအကဲမှာ ရှိတ်စော်ဘွား တာမင် ဘင် ဟာမက်အယ်လ်သာနီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ ဘုရင်စနစ်မှာ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးသည် ဆိုသော အယူအဆ နှင့်  သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးသည် ဟူသော အယူအဆ  ကွဲပြားလျှက် ရှိကြသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၈% အထိ ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။  ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ကာတာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ၂.၆ သန်းမျှ ရှိပြီး ကာတာနိုင်ငံသား ၃၁၃,၀၀၀ ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ၂.၃ သန်း ဖြစ်သည်။
ကာတာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယ အကြီးမားဆုံးသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ အရင်းအမြစ် နှင့် ရေနံ အရင်းအမြစ်ရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေ မြင့်မားသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ အမြင့်မားဆုံးသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကာတာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေး ညွှန်းကိန်း အလွန်မြင့်သော နိုင်ငံများထဲတွင် ပါဝင်ပြီး လူထုဖွံဖြိုးရေး အတွက် အာရပ်နိုင်ငံများထဲတွင် အမြင့်မားဆုံး ဖြစ်သည်။  ကာတာနိုင်ငံသည် အာရပ်ကမ္ဘာတွင် ထိရောက်သော ဩဇာဏာရှိပြီး အာရပ်နွေဦး တော်လှန်ရေး ကာလအတွင်း သူပုန်အဖွဲ့အချို့ကို ထောက်ပံ့ခဲ့ကာ အချို့ကို ငွေကြေးအရ ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီး အချို့အား တကမ္ဘာလုံးသို့ ဖြန့်ကျက်နေသော ၎င်း၏ သတင်းဌာန အဲလ် ဂျာဇီးယား မီဒီယာကွန်ယက်မှ တဆင့် ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ကာတာနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ အရွယ်အစားနှင့် မမျှသော ဩဇာအာဏာ ရှိသဖြင့် အင်အား အသင့်အတင့်ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။  ကာတာသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး အာရပ်နိုင်ငံများထဲတွင် ကမ္ဘာ့ဖလား၏ ပထမဆုံးသော အိမ်ရှင်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ 
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံများထဲမှ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဘာရိန်း၊ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ နှင့် အီဂျစ်တို့မှ အာရပ်နှင့် သံတမန် ရေးရာ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်သမားများကို ထောက်ခံသူနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သူ အဖြစ် စွပ်စွဲခဲ့ကြကာ ၂၀၁၇ ကာတာ သံတမန် အကြပ်အတည်းကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ရောမစာရေးဆရာ ပလိုင်းနီး သည်အဲလ်ဒါးမှ ကာတာကျွန်းဆွယ်တွင် နေထိုင်သူများအကြောင်းကို အစောဆုံး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်မှာ အေဒီ ပထမရာစု အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား "ကာသာရေး" (Catharrei) ဟု ရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထင်ရှားသော ဒေသတစ်ခု၏ အမည်မှ ရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။  ရာစုနှစ် တစ်ခုများကြာသော အခါတွင် တော်လမီ မှ ထိုကျွန်းဆွယ်ကို ဖော်ပြသော ပထမဆုံး မြေပုံကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ထိုနေရာအား ကာတရာ (Catara) ဟု ရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့သည်။  ထိုမြေပုံတွင် ကျွန်းဆွယ်၏ အရှေ့ဘက်ရှိ မြို့အမည်အား ကာဒါရာ (Cadara) ဟု ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည်။ မြို့အမည် ကာတရာ (Catara) နှင့် နေထိုင်သူ ကာတရေး (Cataraei) ဆိုသော အမည်တို့ကို ၁၈ ရာစု အထိ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ကာတရာ (Katara) ဆိုသော စာလုံးပေါင်းကို အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။  နောက်ဆုံးတွင်မှ ယနေ့ခေတ် အခေါ်အဝေါ် ကာတာ ဟူသော အမည်ကို နိုင်ငံအမည်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြလေသည်။
ဘီစီ ၄၀၀၀ ခုနှစ် ဂျဘဲ ဂျဆက်ဆီးယားမှ အစက်အပြောက် ထွင်းထုထားမှုများ
ကာတာတွင် လူတို့နေထိုင်ခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့်မှ စ၍ ဖြစ်သည်။  ကျောက်ခေတ် မှ နေထိုင်မှုများနှင့် ကျောက်လက်နက်များကို ကျွန်းဆွယ်တွင် တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှ အူဘိတ်ခေတ် (၆၅၀၀ မှ ၃၈၀၀ ဘီစီ) လက်မှုပစ္စည်းများကိုလည်း စွန့်ပစ်ထားသော ကမ်းရိုးတန်း လူနေထိုင်ရာ နေရာများတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ကာတာ အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းတွင် တည်ရှိသော အယ်လ် ဒါဆာ ဒေသမှာ အရေးပါသော အူဘိတ် ရှေးဟောင်းနယ်မြေ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ရာသီအလိုက် နေထိုင်ခဲ့ကြသော နေရာ အသေးစား တစ်ခု ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အယ်လ်ခိုးကျွန်းများတွင် တွေ့ရသော ဘီစီ ၂ ရာစု ဘေဘီလုံခေတ် ကတ်ဆိုက်လူမျိုးတို့၏ ပစ္စည်းများသည် ကာတာတွင် နေထိုင်သူ နှင့် ယနေ့ခေတ် ဘာရိန်းနိုင်ငံ နေရာတွင် နေထိုင်သူ ကက်ဆိုက် လူမျိုးတို့ အကြား ကုန်သွယ်မှု ဆက်ဆံရေးအား ဖော်ပြနေသော ထင်ရှားသည့် သက်သေ အထောက်အထားများပင် ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများတွင် ထောင်းထုထားသော ခရုခွံ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ခန့် နှင့် ကက်ဆိုက် အိုးကွဲများ ပါဝင်သည်။ ထိုအထောက်အထားများက ဖော်ပြနေသည်မှာ ကာတာသည် အခွံမာငါးများမှ တဆင့် ဆိုးဆေး ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် အစောဆုံး ဒေသဖြစ်ပြီး ကက်ဆိုက်တို့၏ ခရမ်းရောင် ဆိုးဆေး လုပ်ငန်းမှာ ကမ်းရိုးတန်းတွင် တည်ရှိခဲ့သည်။
အေဒီ ၂၂၄ ခုနှစ်တွင် ဆက်ဆေးနီးယန်း အင်ပိုင်ယာမှာ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ တဝိုက်ရှိ ဒေသများအား ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကာတာသည် ဆက်ဆေးနစ် လူမျိုးတို့၏ ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းတွင် နေရာတစ်ခုမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဖိုးတန် ပုလဲများ နှင့် ခရမ်းရောင် ဆိုးဆေးများ ရောင်းဝယ်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ဆက်ဆေးနစ်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှု အောက်တွင် အာရေဗျ အရှ့ပိုင်း နေထိုင်သူများအား ခရစ်ယာန် ဘာသာနှင့် စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ထို့နောက်တွင် မက်ဆိုပိုတေးမီးယန်း ခရစ်ယာန်တို့မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အရှေ့ဘက်သို့ ဆက်လက် ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။  ထိုခေတ်အခါတွင် ခရစ်ယာန် ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး နေထိုင်ရာ ဒေသ အသစ်များကိုလည်း ဆက်လက် ထူထောင်ခဲ့သည်။  ခရစ်ယာန်ခေတ်၏ နှောင်းပိုင်းတွင် ကာတာတွင် ဆီးရီးယား ဘာသာစကားဖြင့် ဘက်သ်ကွာထရေး ဟု ခေါ်ပြီး ကာတာတို့၏ ဒေသဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် ဒေသ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုဒေသတွင် ကာတာနိုင်ငံ တစ်ခုတည်းသာ ပါဝင်သည် မဟုတ်ဘဲ ဘာရိန်းနိုင်ငံ၊ တာရောက်ကျွန်း၊ အယ်လ်ခက် နှင့် အယ်လ်ဟာဆာတို့လည်း ပါဝင်သည်။
အေဒီ ၆၂၈ ခုနှစ်တွင် တမန်တော် မိုဟာမက် မှ မွတ်စလင် သံတမန်များကို အာရပ်ဒေသ အရှေ့ပိုင်း အုပ်ချုပ်သူ မွန်ဇာအီဘင် ဆာဝါ အယ်လ် တာမီမီ ထံသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းနှင့် ၎င်း၏ ပြည်သူပြည်သားများမှ အစ္စလာမ်ဘာသာကို လက်ခံရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ မွန်ဇာမှ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို လက်ခံပြီး ဒေသအတွင်းရှိ အာရပ် လူမျိုးစု အများအပြား အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းပြီးနောက် အာရပ်တို့မှ မွတ်စလင်များ ပါရှားအား သိမ်းပိုက်ရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ဆက်ဆေးနီးယန်း အင်ပိုင်ယာ ပြိုလဲခဲ့သည်။
အစောပိုင်း နှင့်နှောင်းပိုင်း အစ္စလာမ်ခေတ် (၆၆၁-၁၇၈၃)
၈၅၀ ခုနှစ် အဘာဆစ် ကယ်လီဖိတ် အကျယ်ပြန့်ဆုံး အချိန်
ကာတာနိုင်ငံသည် အူမာယက် ခေတ်အခါက မြင်းနှင့် ကုလားအုပ် မွေးမြူရာတွင် ထင်ရှားသော ဒေသဖြစ်သည်။  ၈ ရာစု သို့ ရောက်သော အခါတွင် ပါရှားပင်လယ်ကွေ့ အတွင်း ၎င်း၏ မဟာဗျူဟာကျသော နေရာကြောင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီး ပုလဲရောင်းဝယ်ရေးတွင် အချက်အခြာ ဌာန တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 
အဘာဆစ် ခေတ်သို့ ရောက်သော အခါတွင် ကာတာ ကျွန်းဆွယ် အနီးတဝိုက်တွင် ပုလဲလုပ်ငန်း သိသိသာသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဘာဆရာမှ အိန္ဒိယ နှင့် တရုတ်သို့ သွားသော သင်္ဘောများသည် ကာတာနိုင်ငံတွင် ခရီးတထောက်နားလေ့ ရှိကြသည်။ တရုတ်ကြွေထည်များ၊ အနောက်အာဖရိကမှ ဒင်္ဂါးများ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ လက်မှုပစ္စည်းများကို ကာတာတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ကာတာတွင် နေထိုင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများကို အသုံးပြု၍ အရည်အသွေး မြင့်မားသော အိမ်များ နှင့် အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြကြောင်းကို ၉ ရာစု ရှေးဟောင်း အကြွင်းအကျန်များမှ တဆင့် သိရသည်။ ထိုခေတ်အခါက မာဝပ်ဘ် ဒေသတွင် ကျောက်တုံးအိမ် ၁၀၀ ကျော်၊ ဗလီ နှစ်ခု နှင့် အဘာဆစ် ခံတပ်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။  သို့သော်လည်း အီရတ်တွင် အဘာဆစ် ကယ်လီဖိတ်၏ ကြွယ်ဝမှုများ လျော့ကျသွားချိန်တွင် ကာတာတွင်လည်း လျော့ကျ သွားခဲ့သည်။ ၁၃ ရာစု မွတ်စလင် ပညာရှင် ယာကွတ် အယ်လ် ဟာမာဝီ၏ စာအုပ်ဖြစ်သော မူဂျမ် အယ်လ် ဘူဒန်တွင် ကာတာရှိ လက်ရာမြောက်သော အစင်းများပါဝင်သည့် အပေါ်အင်္ကျီရှည်များ အကြောင်း နှင့် လှံတံများကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်ကြောင်းတို့ကို တစွန်းတစ ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
အာရေဗျ၏ အရှေ့ပိုင်း အတော်များများကို အူစ်ဖာရစ်တို့မှ ၁၂၅၃ တွင် သိမ်းပိုက်ထားခဲ့သော်လည်း ထိုဒေသအား အော်မတ်မင်းသားမှ ၁၃၂၀ တွင် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ကာတာရှိ ပုလဲတို့သည် နိုင်ငံအတွက် အဓိက ဝင်ငွေရလမ်း အဖြစ် ရှိခဲ့သည်။  ၁၅၁၅ ခုနှစ်တွင် ပေါ်တူဂီမှ မန်နျူရယ် ၁ သည် အော်မတ်စ်နိုင်ငံအား ဩဇာခံအဖြစ် သွတ်သွင်းခဲ့ပြီး အရှေ့အာရေဗျ၏ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများကို ၁၅၂၁ ခုနှစ်တွင် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၁၅၅၀တွင် အယ်လ်ဟာဆာတွင် နေထိုင်သူများက ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒဖြင့် အော်တမန် တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်သို့ ခိုလှုံဝင်ရောက်ခဲ့သည်။  ဒေသအတွင်း စစ်အင်အား အနည်းငယ်သာ ရှိသဖြင့် အော်တမန်တို့အား ဘာနီခါလစ် လူမျိုးစုတို့မှ ၁၆၇၀ တွင် တိုက်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။
ဘာရိန်းနှင့် ဆော်ဒီတို့မှ အုပ်စိုးခြင်း (၁၇၈၃-၁၈၆၈)
၁၇၉၄ အရှေ့အာရေဗျ၏ မြေပုံ
၁၇၆၆ တွင် ကူဝိတ်မှ အူတွတ်လူမျိုး အယ်လ်ခါလီဖာ မျိုးနွယ်စုတို့သည် ကာတာရှိ ဇူဘရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ ရောက်ရှိလာပြီးသည့်နောက်တွင် ဘာနီခါလစ် တို့ အနေနှင့် ကျွန်းဆွယ် အပေါ်တွင် အာဏာလျော့ကျလာခဲ့သော်လည်း အကြီးဆုံး ရွာကိုမူ ဘာနီခါလစ်၏ ဆွေမျိုးဝေးသူ တစ်ဦးမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၇၈၃ ခုနှစ်တွင် ကာတာတွင် အခြေစိုက်သော ဘာနီအွတ်ဘာ မျိုးစု နှင့် ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ် အာရပ်လူမျိုးစု ဘာရိန်းကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပါရှန်းတို့လက်အောက်မှ ၎င်းတို့၏ လက်အောက်သို့ သွတ်သွင်းခဲ့သည်။ အယ်လ်ခါလီဖာ မျိုးနွယ်စုတို့သည် ဘာရိန်းအား ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုကို ကာတာ အထိ ဖြန့်ကျက်ထားခဲ့သည်။
ဇူဘရာ မြို့ပျက်အား တစိတ်တပိုင်း မွမ်းမံထားသည်ကို တွေ့ရစဉ်
၁၇၈၈ ခုနှစ် တွင် ဆော့ဒ် အီဘင် အက် အယ်လ်အာဇစ်မှ ဝါဟာဘီ၏ အိမ်ရှေ့မင်းသား အဖြစ် ကျမ်းကျိန်ပြီးနောက်တွင် ၎င်းက သူ၏ အင်ပိုင်ယာအား ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ နှင့် ကာတာ တို့ ရှိရာ အရှေ့ဘက်သို့ ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ဘာနီခါလစ်အား ၁၇၉၅ တွင် အနိုင်ရပြီးနောက် ဝါဟာဘီတို့သည် စစ်မျက်နှာ နှစ်ဘက်မှ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အော့တမန်နှင့် အီဂျစ်တို့က အနောက်ဘက် စစ်မျက်နှာမှ တိုက်ခိုက်နေစဉ် ဘာရိန်းရှိ အယ်လ်ခါလီဖာ မျိုးနွယ်စုနှင့် အိုမန်တို့က အရှေ့ဘက် စစ်မျက်နှာမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။၁၈၁၁တွင် အနောက်ဘက် စစ်မျက်နှာမှ အီဂျစ်တို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု တိုးတက်လာသည်ကို သတိပြုမိသောကြောင့် ဝါဟာဘီ အာရပ်ခေါင်းဆောင်မှ ဘာရိန်းနှင့် ဇူဘရာရှိ ၎င်း၏ တပ်ဖွဲ့များကို နေရာပြောင်းလဲရန် အတွက် လျှော့ချခဲ့သည်။ မူစကက်မှ ဆက်ဘင်ဆူလတန်မှ ထိုအခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ဝါဟာဘီ တပ်များကို စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဇူဘရာရှိ ခံတပ်ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ပစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် အယ်လ်ခါလီဖာတို့ အာဏာ ပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။
ပင်လယ်ဓားပြမှုများအတွက် အပြစ်ပေးသည့် အနေနှင့် အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၏ သင်္ဘောများမှ ဒိုဟာမြို့အား ၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး မြို့အား ဖျက်စီးခဲ့ကာ မြို့တွင်းနေထိုင်သူ ရာပေါင်းများစွာတို့အား ထွက်ပြေးစေခဲ့သည်။ ၁၈၂၅ ခုနှစ်တွင် သာနီစော်ဘွားမင်းဆက်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် သာနီ အား ပထမဦးဆုံး ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ကာတာသည် ဥပဒေကြောင်းအရ မှီခိုနယ် အဆင့် ရှိသော်လည်း အယ်ခါလီဖာတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်သော စိတ်သည် လူအများကြားတွင် ရှိခဲ့သည်။ ၁၈၆၇ တွင် အယ်လ်ခါလီဖာနှင့် အဘူဒါဘီ အုပ်ချုပ်သူတို့သည် အယ်လ်ဝါခရာသို့ ကြီးမားသော ရေတပ်ကြီးကို စေလွှတ်၍ ကာတာသူပုန်တို့ကို ချေမှုန်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ၁၈၆၇-၆၈ ကာတာ-ဘာရိန်း စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုစစ်ပွဲ အတွင်းတွင် ဘာရိန်းနှင့် အဘူဒါဘီ တပ်များက ဒိုဟာ နှင့် အယ်လ်ဝါခရာတို့အား လုယက်ဖျက်စီး ခဲ့ကြသည်။  သို့သော်လည်း ဘာရိန်းတို့၏ အကြမ်းဖက်မှုများသည် ၁၈၂၀ အန်ဂလို-ဘာရိန်း စာချုပ်ကို ဖောက်ဖျက်ရာကျသည်။ ပူးပေါင်း ကျူးကျော်ခြင်း နှင့် ကာတာတို့၏ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဗြိတိသျှ နိုင်ငံရေး ကိုယ်စားလှယ် လူးဝစ် ပယ်လီအား ၁၈၆၈ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက် ဖြန်ဖြေမှု ပြုစေခဲ့သည်။ သူ့အနေနှင့် ဘာရိန်းနှင့် ကွာတာသို့ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် သွားရောက်ခြင်းကလည်းကောင်း၊ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာသော ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူစာချုပ်သည် လည်းကောင်း မှတ်တိုင်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ထိုအချက်များမှ ဘာရိန်းနှင့် ကာတာ ကွဲပြားခြားနားကြောင်း သိသာရှင်းလင်းစွာ လက်ခံခဲ့ပြီး မိုဟာမက် ဘင် သာနီ၏ ရာထူးနေရာကိုလည်း တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သဘောတူညီချက် ဖောက်ဖျက်မှု အတွက် ဘာရိန်းတို့အား သဘောမတူကြောင်း တရားဝင် သတိပေးခဲ့ရုံသာမက ဗြိတိသျှတို့၏ အစောင့်အရှောက်ခံ နယ်မြေမှ ကာတာ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး မိုဟာမက် ဘင် သာနီ အား ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုညှိနှိုင်းမှု၏ ရလဒ်ကြောင့် နိုင်ငံရေး လက္ခဏာ အသစ်တစ်ခု ရှိသော နိုင်ငံတစ်ခု အဖြစ်ရရှိခဲ့သော်လည်း ၁၉၁၆ ရောက်မှသာ တရားဝင် အစောင့်အရှောက်ခံ နယ်မြေ တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၈၉၁ အဒေါ့ဖ် စတိုင်လာ၏ ကာတာမြေပုံ
၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရသော ဒိုဟာမြို့ဟောင်း
အော့တမန်အင်ပိုင်ယာ အပိုင် ဘဂ္ဂဒက် ဗီလာယက် နယ်မြေရှိ ဘုရင်ခံ မီဒတ်ပါရှာ ၏ နိုင်ငံရေး နှင့် စစ်ရေး အရ ဖိအားပေးမှုကြောင့် အယ်လ်သာနီတို့သည် ၁၈၇၁ ခုနှစ်တွင် အော့တမန်အင်ပိုင်ယာ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ရသည်။  အော့တမန် အစိုးရမှ တန်ဇီမက် ခေါ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အခွန်ကောက်ခံခြင်း နှင့် မြေမှတ်ပုံတင်ခြင်း အစရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ထိုဒေသများကို အင်ပိုင်ယာ အတွင်းသို့ အပြည့်အဝ ပေါင်းစည်းရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မကြာမီတွင် ကာတာ နှင့် အော့တမန်တို့၏ ဆက်ဆံရေး အေးစက်လာခဲ့ပြီး ၁၈၈၂ ခုနှစ်တွင် အယ်လ်သာနီတို့ အဘူဒါဘီ သိမ်းပိုက်ထားသော အယ်လ်ခေါ သို့ ချီတက်ရာတွင် အကူအညီပေးရန် အော့တမန်တို့မှ ငြင်းဆန်ခဲ့သဖြင့် ဆက်ဆံရေး ပိုမို ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အော့တမန် တို့မှ ကာတာ ၏ ခေမကမ် ခေါ် ဘုရင်ခံ အဖြစ် အယ်လ်သာနီတို့ အစား နေရာရယူရန် ကြိုးစားသည့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ ဖြစ်သော မိုဟာမက် ဘင် အဘဒူ ဝါဟပ်အား ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် ထောက်ခံခဲ့သည်။ထို့အတွက်ကြောင့် အယ်လ်သာနီတို့မှ အော့တမန်တို့သည် ကျွန်းဆွယ်အား အင်အားသုံး ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားသည်ဟု ယုံကြည်ကာ နောက်ဆုံးတွင် ပုန်ကန် ခဲ့ကြသည်။ အယ်လ်သာနီတို့သည် ၁၈၉၂ ခုနှစ်တွင် ဘုရင်ခံ အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး အခွန် ဆက်လက် ပေးဆောင်ခြင်း မပြုတော့ပေ။
၁၈၉၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မာမက် ဟာဖစ် ပါရှာသည် ကာတာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး မပေးဆောင်ရသေးသော အခွန်အခများကို သိမ်းယူရန်နှင့် အော့တမန်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အဆိုပြုချက်များကို ဆန့်ကျင်သည့် အတွက် ဂျာဆင် ဘင် မိုဟာမက်ထံမှ ဖြေရှင်းချက် တောင်းရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ အသတ်ခံရနိုင်သည် သို့မဟုတ် အဖမ်းခံရမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ဂျာဆင်သည် ဒိုဟာမြို့၏ အနောက်ဘက် ၁၀ မိုင်အကွာရှိ အယ်လ်ဝက်ဂျ်ဘာ သို့ မျိုးနွယ်စုဝင် အချို့ ခြံရံကာ ဆုတ်ခွာခဲ့သည်။ မာမက် က ဂျာဆင်အား ၎င်း၏ တပ်ဖွဲ့ကို လူစုခွဲရန်နှင့် အော့တမန်တို့ အတွက် ၎င်း၏ သစ္စာကို ပြသရန် တောင်းဆိုသော်လည်း ဂျာဆင်မှ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ မတ်လတွင် အာဏာဖီဆန်မှုကို အပြစ်ပေးသည့် အနေနှင့် မာမက်မှ ဂျာဆင်၏ ညီအစ်ကို တော်စပ်သူနှင့် အခြားသော ထင်ရှားသည့် ကာတာ ခေါင်းဆောင် ၁၃ ယောက်တို့ကို အော့တမန် စစ်သင်္ဘော မာရစ်ပေါ်တွင် ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးထားသူများအား တူရကီ လိုင်ရာငွေ ၁၀,၀၀၀ ဖြင့် ပြန်လွှတ်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုကို မာမက်မှ ငြင်းဆန်ပြီးနောက် ၎င်းမှ စစ်သည် အင်အား ၂၀၀ ခန့် ရှိသော စစ်ကြောင်းကို ယူစွတ် အီဖန်ဒီ ဦးဆောင်ပြီး ဂျာဆင်ရှိရာ အယ်လ်ဝက်ဂျ်ဘာ ခံတပ်သို့ ချီတက်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သဖြင့် အယ်လ်ဝက်ဂျ်ဘာ စစ်ပွဲ အစပြုခဲ့သည်။
အီဖန်ဒီ၏ တပ်ဖွဲ့များသည် အယ်လ်ဝက်ဂျ်ဘာသို့ ရောက်ပြီး မကြာမီတွင် များပြားလှသော ကာတာ ခြေလျင်တပ် နှင့် မြင်းတပ်များမှ သေနတ်ဖြင့် အပြင်းအထန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရသည်။ သူတို့သည် ရှီဘာကာ ခံတပ်သို့ ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီး ထိုနေရာတွင်လည်း ကာတာတပ်တို့၏ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဆက်လက် ဆုတ်ခွာခဲ့ကြရသည်။ ၎င်းတို့သည် အယ်လ်ဘစ်ဒါ ခံတပ်သို့ ဆုတ်ခွာပြီးနောက်တွင် ဂျာဆင်၏ ရှေ့တက်လာသော စစ်ကြောင်းမှ ခံတပ်အား သိမ်းပိုက်ခဲ့သဖြင့် အော့တမန်တို့ အနေနှင့် ရှုံးနိမ့်ကြောင်း လက်ခံခဲ့ရပြီး မာမက်ပါရှာ၏ မြင်းတပ်များ ဟိုဖပ်ဖ် သို့ ကုန်းကြောင်းဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဆုတ်ခွာနိုင်ရန် အတွက် ဖမ်းထားသူများကို အလဲအလှယ်ပြု၍ လွှတ်ပေးခဲ့ရသည်။  ကာတာ တို့ အနေနှင့် အော့တမန် အင်ပိုင်ယာမှ လွတ်လပ်ရေး အပြည့်အဝ မရခဲ့သော်လည်း စစ်ပွဲ၏ ရလဒ်ဖြင့် ဖိအားပေး ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်မှ တဆင့် နောက်ပိုင်းတွင် ကာတာသည် အော့တမန် အင်ပိုင်ယာအတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်မှု (၁၉၁၆-၁၉၇၁)
၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ဆူဘာရာ ခံတပ်
ပထမကမ္ဘာစစ် အတွင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ စစ်ပွဲများ၌ စစ်မျက်နှာ အများအပြားတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် အော့တမန် အင်ပိုင်ယာသည် ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကာတာသည် အော့တမန် တို့အား ဆန့်ကျင်သည့် အာရပ်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးမှာ အောင်မြင်ခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း အော့တမန်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှု အာဏာ ဆက်လက် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း နှင့် အော့တမန် အင်ပိုင်ယာတို့မှ ရှိတ်စော်ဘွား အဗ္ဗဒူလာ ဘင် ဂျာဆင် အယ်လ်သာနီ နှင့် ၎င်းအား ဆက်ခံသူများအား ကာတာကျွန်းဆွယ်ကို အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်အား အသိအမှတ်ပြု ပေးအပ်ခဲ့ရသည်။ အော့တမန်တို့ အနေနှင့် ကာတာရှိ ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေး အားလုံးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပြီး ပထမ ကမ္ဘာစစ် စတင်ဖြစ်ပွားသော အခါတွင် ဗြိတိသျှ ဘက်တော်သား ဖြစ်သော အဘဒူလာ ဘင် ဂျာဆင် အယ်လ်သာနီမှ ၎င်းတို့အား ၁၉၁၅ တွင် ဒိုဟာမှ ဖိအားပေး စွန့်ခွာစေခဲ့သည်။
အော့တမန် အင်ပိုင်ယာအား ပိုင်းခြားမှု၏ ရလဒ် အဖြစ် ကာတာသည် ၁၉၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်တွင် ဗြိတိသျှတို့၏ အစောင့်အရှောက်ခံ နယ်မြေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းမှ ရှိတ်စော်ဘွား အဗ္ဗဒူလာ ဘင် ဂျာဆင် အယ်လ်သာနီ နှင့် သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ကာတာအား ထရူရှယ်နိုင်ငံများ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ် အတွင်း ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အဗ္ဗဒူလာမှ အခြားသော အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် ဗြိတိသျှ အစိုးရ၏ ကြိုတင်သဘောတူညီချက် မပါဘဲ ဆက်ဆံရေး မဖော်ဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှတို့မှ ကာတာအား ပင်လယ်ဘက်မှ တိုက်ခိုက်မှု အားလုံးအား အကာအကွယ်ပေးရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်တွင် အဗ္ဗဒူလာမှ ဗြိတိသျှ အစိုးရနှင့် အခြား သဘောတူ စာချုပ်တစ်ခုအား လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ထိုစာချုပ်မှ ကာတာအား ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခြိမ်းခြောက်မှုများမှ အကာအကွယ်ရရန် အခွင့်အရေး ပေးခဲ့သည်။ ရေနံများကို ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ကြောင့် ထုတ်လုပ်နိုင်မှု နောက်ကျခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှ အင်ပိုင်ယာ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင် စတင် လျော့ကျ လာခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် အိန္ဒိယ နှင့် ပါကစ္စတန်တို့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်တွင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်များတွင် ရေနံသည် ကာတာ၏ အဓိက ဝင်ငွေ အဖြစ် ပုလဲလုပ်ငန်း နှင့် ငါးလုပ်ငန်း အစား စတင် အစားထိုး ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ရေနံမှ ရရှိသော ငွေများဖြင့် ကာတာ၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တိုးချဲ့ခြင်း နှင့် ခေတ်မီအောင် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို စတင် ပံ့ပိုးခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်များတွင် ဗြိတိသျှတို့ ပါရှားပင်လယ်ကွေ့ အတွင်းရှိ အာရပ်စော်ဘွားနယ်များမှ ရုပ်သိမ်းဆုတ်ခွာရန် ဖိအားများ များ များပြား လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့မှ နောက် ၃ နှစ်အကြာတွင် ပါရှားပင်လယ်ကွေ့၏ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်တော့မည် မဟုတ်ဟု ကြေငြာသော အခါတွင် ကာတာသည် ဘာရိန်း နှင့် အခြားသော ထရူရှယ် နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံ ဖက်ဒရယ် အစိုးရသို့ ပူးပေါင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒေသတွင်း အငြင်းပွားမှုများကြောင့် ကာတာအနေနှင့် နောင်တွင် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာမည့် ထိုညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်ကာ လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေး နှင့် နောက်ပိုင်းခေတ် (၁၉၇၁ မှ ယခု)
ဒိုဟာ ခရောနစ်မှ မြင်တွေ့ရသော အနောက်ဘက် ပင်လယ်အော် မြင်ကွင်းနှင့် ရိုးရာလှေ
၁၈၆၈တွင် ကာတာနိုင်ငံသည် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း နှင့် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေ သဘောတူ စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုစာချုပ်သည် ၁၉၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထို အထွေထွေ သဘောတူ စာချုပ်အရ နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ကိစ္စများအား ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းသို့ လွှဲအပ်ထားပြီး ပြည်တွင်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်အား ခွင့်ပြုထားခဲ့သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် "အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံ တစ်ခု အနေနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် တာဝန်ယူမှု အပြည့်အဝ ရှိရေးနှင့် မကိုက်ညီသော" ထိုသို့သော "အထူး သဘောတူစာချုပ်" များအား အဆုံးသတ် ခဲ့သည်။ ထို လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ကာတာအား အုပ်စိုးသူနှင့် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း အစိုးရတို့ကြား သဘောတူညီချက်မှ တဆင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ် ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲ အတွင်းတွင် ကာတာနိုင်ငံသည် အရေးပါသော နေရာတစ်နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ခပ်ဖ်ဂျီတိုက်ပွဲတွင် ကာတာ တင့်ကားများသည် မြို့တွင်းရှိ လမ်းများ အတွင်း ဝင်ရောက်၍ အီရပ်စစ်တပ် နှင့် ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်နေသော ဆော်ဒီအာရေဗျ အမျိုးသား စောင့်ရှောက်ရေး တပ်များအတွက် ပစ်ကူပေးခဲ့သည်။ ကာတာသည် ကနေဒါမှ ညွန့်ပေါင်းတပ်များ အတွက် ၎င်း၏ နိုင်ငံအား တိုက်ခိုက်ရေး ကင်းလှည့် လေယာဉ်များအတွက် လေတပ် အခြေစိုက်စခန်း အဖြစ် အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့ပြီး အမေရိကန် နှင့် ပြင်သစ် လေတပ်တို့အားလည်း ၎င်း၏ နယ်နိမိတ် အတွင်း ဝင်ရောက် အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အီမာစော်ဘွား ဟာမက် ဘင် ခါလီဖာ အယ်လ်သာနီသည် ၎င်း၏ ဖခင် ဖြစ်သူ ခါလီဖာ ဘင် ဟာမက် အယ်လ်သာနီ ထံမှ စစ်တပ်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့သာမက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ အပြင် ပြင်သစ်တို့၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုအား လွှဲပြောင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ အီမာစော်ဘွား ဟာမက်၏ လက်ထက်တွင် ကာတာသည် အတန်အသင့် ပွင့်လင်းလာခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အယ်လ်ဂျာဇီးယား ရုပ်မြင်သံကြားဌာနကို တည်ထောင်ခြင်း၊ ၁၉၉၉ ခု မြူနီစီပါယ် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အမျိုးသမီးများ မဲပေးခွင့် ရလာခြင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲခြင်း နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း တည်ထောင်ခြင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၀ တွင် ကာတာသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန် အခွင့်အရေးကို အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများတွင် ကမ္ဘာ့ဖလားကို ပထမဆုံး အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပမည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အီမာမှ ကာတာ၏ ပထမဆုံး ဥပဒေပြု ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပရန် ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ် တစ်ဝက် အတွင်း ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ၂၀၁၃ ဇွန်လတွင် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကာ နောက်ထပ် ကာတာ၏ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၀၁၉ အထိ ရွှေ့ဆိုင်းသွားနိုင်သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကာတာသည် အမေရိကန်တို့ အီရတ်နိုင်ငံအား ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရာတွင် အမေရိကန် စစ်ဆင်ရေး ဗဟိုဌာနချုပ် နေရာ အဖြစ်လည်းကောင်း အဓိက စစ်ထွက်ရာ ဒေသတစ်ခု အဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။၂၀၀၅ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဒိုဟာ ပလေယာ ဇာတ်ရုံတွင် အသေခံဗုံးခွဲမှုကြောင့် ဗြိတိသျှ ဆရာမတစ်ဦးအား သေဆုံးစေခဲ့သဖြင့် ယခင်က အကြမ်းဖက်မှုကို မကြုံတွေ့ဖူးသော တစ်နိုင်ငံလုံး တုန်လှုပ်သွားခဲ့သည်။ ထိုဗုံးခွဲမှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ကာတာရှိ အီဂျစ်လူမျိုး အိုမာ အာမက် အဗ္ဗဒူလာ အလီ ဖြစ်ပြီး အာရပ်ကျွန်းဆွယ်ရှိ အယ်လ်ကိုင်းဒါး အကြမ်းဖက် အဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်နေသည်ဟု သံသယရှိခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကာတာသည် နေတိုး၏ လစ်ဗျား စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး လစ်ဗျား အတိုက်အခံများကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်ဟု သတင်းရသည်။ထို့အပြင် ယခုလက်ရှိ ဆီးရီးယား ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း သူပုန်အဖွဲ့များအား အဓိက လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးနေသူလည်း ဖြစ်သည်။ကာတာနိုင်ငံသည် အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်လည်း ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလတွင် တာလီဘန်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ အဆင်ပြေစေရန် အတွက် ကာတာတွင် နိုင်ငံရေး ရုံးတစ်ခုအား ဖွင့်လှစ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ရှိတ်စော်ဘွား တာမင် ဘင် ဟာမက် အယ်လ်သာနီသည် ၎င်း၏ ဖခင်မှ ရုပ်မြင်သံကြား မိန့်ခွန်းဖြင့် အာဏာလွှဲပြောင်းပြီးနောက် ကာတာ၏ အီမာစော်ဘွား ဖြစ်လာခဲ့သည်။  ရှိတ်စော်ဘွား တာမင်သည် နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးကို မြှင့်တင်ရန် အတွက် အဓိက ဦးစားပေး အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပြီး ထိုဆောင်ရွက်ရန် အချက်များတွင် အဆင့်မြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပညာရေးတို့ ဖော်ထုတ်ရန် ပါဝင်သည့် အပြင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက် ပြင်ဆင်ရန် အတွက် နိုင်ငံ၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို တိုးချဲ့ရန်လည်း ပါဝင်သည်။
ကာတာသည် ယီမင်ရှိ ဟိုသစ်သူပုန်များနှင့် ယခင် ၂၀၁၁ အာရပ်နွေဦး တော်လှန်ရေး အတွင်း ဖြုတ်ချခြင်းခံခဲ့ရသော သမ္မတ အလီ အဗ္ဗဒူလာ ဆလေး၏ သစ္စာခံများကို တိုက်ခိုက်သည့် ဆော်ဒီအာရေဗျ ဦးဆောင်သည့် ယီမင် ပြည်တွင်းစစ် အတွင်း ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ တွင် အီဂျစ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၊ ဘာရိန်း၊ ယီမင် နှင့် လစ်ဗျားတို့မှ ကာတာနှင့် သံတမန် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး ကာတာနိုင်ငံမှ အစွန်းရောက်များကို ထောက်ပံ့နေသည့် အတွက်ကြောင့်ဟု ဆိုသည်။
အီမာစော်ဘွား တာမင် ဘင် ဟာမက် အယ်လ်သာနီအား အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရန့် နှင့် အတူ ၂၀၁၇ မေလတွင် တွေ့ရစဉ်
ကာတာနိုင်ငံသည် စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်  သို့မဟုတ် သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးပြီး အယ်လ်သာနီ မိသားစုမှ အုပ်ချုပ်သည်။အယ်လ်သာနီ ဆွေမျိုးစုသည် ၁၈၂၅ ခုနှစ် စော်ဘွား မင်းဆက် တည်ထောင်သည့် အချိန်မှ အစပြု၍ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကာတာသည် ဥပဒေပြု ကောင်စီအတွင်း အဖွဲ့ဝင့် ၄၅ ဦး အနက် ၃၀ ဦးကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအား တခဲနက် ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး ထောက်ခံသူ ၉၈% ခန့် ရှိသည်။ 
ကာတာနိုင်ငံ၏ အဋ္ဌမမြောက် အီမာစော်ဘွားမှာ တာမင် ဘင် ဟာမက် အယ်လ်သာနီ ဖြစ်ပြီး သူ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဟာမက် ဘင် ခါလီဖာ အယ်လ်သာနီမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် အာဏာလွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နန်းရင်းဝန်ကြီးတွင် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို ခန့်အပ်နိုင် ဖြုတ်ချနိုင်သော သီးသန့် အာဏာရှိပြီး ထိုဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများ ပေါင်းစပ်၍ ဝန်ကြီးကောင်စီ ကို ဖွဲ့စည်းထားကာ ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံအတွင်း အမြင့်မားဆုံးသော အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ ရှိသည်။ ထိုဝန်ကြီး ကောင်စီမှ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရန် အတွက်လည်း အဆိုပြုနိုင်သည်။ ဝန်ကြီးကောင်စီ မှ အဆိုပြုသော ဥပဒေ နှင့် အမိန့်ဒီကရီ များကို မာဂျီလစ် အယ်လ် ရှူရာ ဟုခေါ်သော အကြံပေးကောင်စီသို့ ဆွေးနွေးရန် အတွက် တင်ပြပြီး ထိုမှတဆင့် အတည်ပြုရန်အတွက် အီမာစော်ဘွားထံသို့ ဆက်လက်တင်ပြကြသည်။ အကြံပေး လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲရန်နှင့် ဥပဒေ အတည်ပြုရန် အာဏာ အနည်းငယ်သာ ရှိပြီး ကိစ္စရပ် အားလုံးအတွက် အီမာစော်ဘွားတွင်သာ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။  လက်ရှိ ကောင်စီတွင်ရှိသော ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးမှာ အီမာစော်ဘွားမှ ခန့်အပ်ထားသူများသာ ဖြစ်သည်။  အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ၁၉၇၀ ခုနှစ် မှ စ၍ ဥပဒေပြု အမတ် ရွေးကောက်ပွဲ မရှိခဲ့ဘဲ ထိုမတိုင်မီကမူ ဥပဒေပြု အဖွဲ့၏ တစိတ်တပိုင်းကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ဥပဒေပြု အမတ် ရွေးကောက်ပွဲကို အစောဆုံး ၂၀၁၉ တွင် ပြန်လည် ကျင်းပရန် ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်။ 
နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း နှင့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ တည်ထောင်မှုကို ကာတာ ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိပေ။
ကာတာနိုင်ငံ၏ အခြေခံ ဥပဒေ အရ ရှာရီယာ ဥပဒေသည် ကာတာ ဥပဒေ၏ အဓိက ရင်းမြစ် ဖြစ်သည်။  တကယ်တမ်းတွင်မူ ကာတာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ သည် တရားမ ဥပဒေစနစ် နှင့် ရှာရီယာ ဥပဒေ တို့ ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။  မိသားစု ဥပဒေ၊ အမွေဆက်ခံခြင်း ဥပဒေ နှင့် အချို့သော ရာဇဝတ်မှုများ ( အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှု၊ ဓားပြမှု နှင့် လူသတ်မှု တို့ အပါအဝင်) အတွက် ရှာရီယာ ဥပဒေကို ကျင့်သုံးသည်။ အချို့သော အမှုအခင်းများတွင် ရှာရီယာ ဥပဒေကို အခြေခံသော မိသားစု တရားရုံးမှ အမျိုးသမီး သက်သေသည် အမျိုးသား သက်သေ၏ တစ်ဝက်မျှသာ တန်သည် ဟု ယူဆလေ့ ရှိသည်။  ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေ ပုဒ်မများ ပါဝင်သော မိသားစု ဥပဒေကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အစ္စလာမ် ထုံးစံ မိန်းမ တစ်ယောက်ထက် ပို၍ ယူခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသည်။ 
ရှာရီယာ ဥပဒေကို ဟန်ဘာလီ မွတ်စလင် ထုံးစံ ဖြင့် ကျင့်သုံးသောကြောင့် တရားဥပဒေ အရ ကိုယ်ထိလက်ရောက် အပြစ်ပေးခြင်းမှာ ကာတာတွင် မထူးဆန်းပေ။ အရက်သောက်ခြင်း နှင့် တရားမဝင် သံဝါသ ပြုခြင်း တို့အတွက် ကြိမ်ဒဏ် အပြစ်ပေးလေ့ ရှိသည်။ ကာတာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ အပိုဒ် ၈၈ တွင် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှု အတွက် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ သတ်မှတ်ထားပြီး  ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ထိုပြစ်ဒဏ် ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အများအားဖြင့် နိုင်ငံခြားသား များ ဖြစ်သော လူ ၁၈ ဦးမှာ ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၄၀ မှ အချက် ၁၀၀ အတွင်း အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရပြီး တရားမဝင် လိင်ဆက်ဆံရေး သို့မဟုတ် အရက်သေစာ သောက်သုံးခြင်း အတွက် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လည်း အများအားဖြင့် နိုင်ငံခြားသား များဖြစ်သော လူ ၂၁ ဦးမှာ အလားတူ ကျူးလွန်မှုများကြောင့်ပင် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၃၀ မှ ၁၀၀ အထိ အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရပြီး  ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်မူ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား ၆ ဦးမှာ ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၄၀ မှ ၁၀၀ အတွင်း အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သော မွတ်စလင် များသာလျှင် ထိုအပြစ်ဒဏ် ကျခံနိုင်သဖြင့် ထိုပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းများအား အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်သည် မလုပ်ဆောင်သည် ဆိုသော အချက်ကို မသိရပေ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် မွတ်စလင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတစ်ဦးအား အရက်သေစာ သောက်စားမှု အတွက် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၄၀ အပြစ်ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် မွတ်စလင် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား တစ်ဦးအား အရက်သေစာ သောက်သုံးခြင်း နှင့် အရက်မူးနေစဉ် ကားမောင်းခြင်း အတွက် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၄၀ အပြစ်ပေးခဲ့သည်။  ကျောက်ခဲဖြင့် ထုသတ်ခြင်းမှာ ကာတာတွင် တရားဝင်သော အပြစ်ပေးနည်း ဖြစ်ပြီး ဘာသာပြောင်းခြင်းနှင့် လိင်တူ ဆက်ဆံခြင်းအတွက် သေဒဏ် အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်သည်။  ဘာသာတရားအား စော်ကားခြင်း အတွက် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်ပြီး အခြားသူများအား ဘာသာကူးပြောင်းရန် ဆွယ်ခြင်းအတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် အပြစ်ပေးခံရနိုင်သည်။ 
အရက်သေစာ သောက်သုံးခြင်းသည် ကာတာ၌ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တရားဝင်ပြီး အချို့သော ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်များ အနေနှင့် ၎င်းတို့၏ မွတ်စလင် မဟုတ်သော ကပ်စတန်မာများ အတွက် အရက် ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။  မွတ်စလင်များသည် အရက်သောက်သုံးခွင့် မရှိဘဲ အရက်သေစာ သောက်စားသည်ကို ဖမ်းမိပါက ကြိမ်ဒဏ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် နေရပ်သို့ ပြန်ပို့ခြင်း တို့ ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည်။ မွတ်စလင် မဟုတ်သော နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ အနေနှင့် တစ်ကိုယ်ရည် သောက်သုံးရန် အတွက် အရက်ဝယ်ခွင့် ပါမစ် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ကာတာ လေကြောင်းလိုင်း၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော ကာတာ ဖြန့်ချိရေး ကုမ္ပဏီအား အရက်နှင့် ဝက်သား တင်သွင်းခွင့် ပေးထားပြီး ထိုကုမ္ပဏီမှ နိုင်ငံအတွင်း တစ်ခုတည်းသော အရက်အရောင်းဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ထားကာ အရက်လိုင်စင် ရှိသူများအား ဝက်သား ရောင်းချပေးသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ အတွင်း ပရိသတ် ဇုန် များတွင် အရက်ရောင်းချ ခွင့်ပေးမည်ဟု ကာတာ အာဏာပိုင်များက လိုလားစွာ ခွင့်ပြုထားသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အထိ ဒိုဟာမြို့ အနီး လူတို့ ပြုလုပ်ထားသော ကျွန်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် ပါးလ်ကာတာတွင် အရက် ရောင်းချခွင့် ပြုထားသည်။ထိုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် စားသောက်ဆိုင်များအား အရက်ရောင်းချချင်း မပြုရန် တားမြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ တားမြစ်မှုအတွက် အကြောင်းပြချက် မပေးခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း အများက ထင်မြင်ယူဆကြသည်မှာ အစိုးရ အနေနှင့် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော တော်ဝင်အကြံပေးအဖွဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီတွင် ပိုမို၍ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသည့် ပုံရိပ်ကို လိုချင်သောကြောင့် ဖြစ်သည် ဟူ၍ ယူဆကြသည်။ အစိုးရနှင့် အပန်းဖြေ စခန်း တည်ဆောက်သူတို့ကြား ငွေရေးကြေးရေး အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားနေသည်ဟုလည်း ကောဠာဟာလ ထွက်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား နိုင်ငံ၏ ကန့်သတ်ထားသည့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို သတိပေးရန်အတွက် သင့်တင့်လျှောက်ပတ်ခြင်း ကမ်ပိန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး တိုးရစ်များ အနေနှင့် အသားကပ်ဘောင်းဘီများ၊ မီနီစကတ်များ၊ လက်ပြတ်အင်္ကျီများနှင့် တိုသော ကျပ်သော အဝတ်များကို အများပြည်သူ ရှေ့မှောက်တွင် မဝတ်ဆင်ရန် အကြံပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသားများ အနေနှင့်လည်း ဘောင်းဘီတိုနှင့် စွပ်ကျယ်သာ ဝတ်ဆင်ခြင်း မပြုရန် သတိပေးခဲ့သည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ အာရှတခွင်နှင့် အာဖရိက အချို့အစိတ်အပိုင်းတို့မှ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများသည် ကာတာသို့ အလုပ်ကြမ်းသမားများ သို့မဟုတ် အိမ်စေများ အဖြစ် မိမိတို့ ဆန္ဒအလျောက် လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း အချို့မှာ ၎င်းတို့ ဆန္ဒနှင့် မညီသော ဖိနှိပ်ခိုင်းစေခြင်းကို ခံကြရသည်။ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး အဓိက ဖောက်ဖျက်မှုများတွင် ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ပေးရန် ရှိသည်များကို မပေးဘဲ ထားခြင်း၊ အလုပ်ရှင်မှ ထောက်ပံ့ရန် ရှိသည့် အခွင့်အရေးများကို အလုပ်သမား ထံမှ ပိုက်ဆံ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ သွားလာမှုကို ကန့်သတ်ခြင်း (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ခရီးသွားလက်မှတ် နှင့် ထွက်ခွင့် ပါမစ်များကို သိမ်းထားခြင်း)၊ ချုပ်နှောင်ထားခြင်း၊ ဥပဒေနှင့် အရေးယူရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း တို့အပြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ ပါဝင်သည်။ ကာတာသို့ ရောက်ရှိလာသော ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများမှာ ၎င်းတို့ နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတွင် အလုပ်ရှာဖွေပေးသူများအား မတန်တဆ ဈေးနှုန်းများဖြင့် အလုပ်ရရန် ပေးခဲ့ကြရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် လေ့လာချက်အရ ကာတာရှိ ရာဇဝတ်မှု ပုဒ်မများတွင် ရာဇဝတ်မှု ပြစ်ဒဏ်များ အဖြစ် ကြိမ်ဒဏ်နှင့် ကျောက်ခဲဖြင့် ထုသတ်ခြင်း တို့ကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီမှ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ကုလသမဂ္ဂ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် မှ ချမှတ်ထားသော လိုက်နာရန် အချက်များကို ချိုးဖောက်ကြောင်း သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကာတာနိုင်ငံသည် သေဒဏ်ကို နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အတွက် ဆက်လက်ကျင့်သုံးသည်။ သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းမှာ ရှားပါးပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ် ကတည်းက ကာတာတွင် နိုင်ငံတော်မှ သေဒဏ်ပေးခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ကာတာတွင် လိင်တူဆက်ဆံမှုများမှာ တရားမဝင်ဘဲ သေဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်သည်။
ကာတာရှိ စပွန်ဆာပေးခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ အရ အလုပ်အတွက် စပွန်ဆာ ပေးထားသော အလုပ်ရှင်သည် မိမိတစ်ဦးတည်း၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် အလုပ်သမား၏ နေထိုင်ခွင့် ပါမစ်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သမား အနေနှင့် အလုပ်ရှင် ပြောင်းလဲခြင်းကို ငြင်းပယ်နိုင်ခြင်း၊ ရဲ ထံသို့ ထွက်ပြေးသွားကြောင်း သတင်းပို့နိုင်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ခွာခွင့်ကို ငြင်းဆန်နိုင်ခြင်း တို့အတွက် အခွင့်အာဏာ ရှိသည်။  ထို့အတွက်ကြောင့် အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်သမား၏ လှုပ်ရှားမှုကို ကန့်သတ်နိုင်ပြီး အလုပ်သမားဘက်မှ အနိုင်ကျင့် ခံရခြင်းကို သတင်းပို့ရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုရန် ကြောက်ရွံ့ကြမည် ဖြစ်သည်။  နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂ အဖွဲ့ (အိုင်တီယူစီ) ၏ အဆိုအရ ဗီဇာ စပွန်ဆာပေးသည့် စနစ် အရ အလုပ်သမား အနေနှင့် အနိုင်ကျင့်သည့် အလုပ်ရှင်ထံမှ ထွက်ခွာရန် ခက်ခဲ၍ ပြည်ပသို့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မသွားနိုင်သည့် အတွက် အဓမ္မ ခိုင်းစေမှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည် ဟု ဆိုသည်။ ကာတာသည် ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အတွက်လည်း လစာ စံသတ်မှတ်ချက်ကို ပြဋ္ဌာန်း ထားခြင်း မရှိပေ။ ကာတာမှ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ အကြံပေး ကုမ္ပဏီ ဒီအယ်လ်အေ ပိုင်ပါ အား ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား စနစ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အစီရင်ခံစာ တင်ပြရန် ငှားရမ်း တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ မေလတွင် ဒီအယ်လ်အေ ပိုင်ပါမှ ကာဖလာ စနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အကြံပြုချက် ၆၀ ကျော်ကို တင်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းတို့တွင် ထွက်ခွင့်ပါမစ် စနစ်ကို ပယ်ဖျက်ရန်နှင့် ကာတာမှ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကတိပြုထားသော အနည်းဆုံး လစာစနစ်ကို စတင်ရန်တို့ ပါဝင်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကာတာ အာဏာပိုင်တို့မှ သီးခြားဖြစ်သော အလုပ်သမားသမဂ္ဂ တည်ထောင်ခွင့်ပေးမည့် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒကို ကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ အားလုံးအတွက် ပြည်တွင်း အလုပ်ရှင်မှ စပွန်ဆာ ပေးရန် လိုအပ်သော စပွန်ဆာ စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းမည်ဟူ၍လည်း ကြေငြာခဲ့သည်။ အလုပ်သမား ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မှုများထဲတွင် အလုပ်သမားများ၏ လခအားလုံးကို သူတို့၏ ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရန် အာမခံခြင်း နှင့် နွေရာသီအတွင်း အပူဆုံး အချိန်များတွင် ပြင်ပတွင် အလုပ်လုပ်ချိန် ကို ကန့်သတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။၂၀၁၅ အစောပိုင်းတွင် ရေးဆွဲသော ဥပဒေကြမ်းမှ အလုပ်သမားများ၏ လစာကို ပေးရန် ပျက်ကွက်သော ကုမ္ပဏီများ အနေနှင့် အလုပ်သမား ထပ်မံ ငှားရမ်းခွင့်ကို ခဏတာ ဆိုင်းငံ့ထားမည် ဆိုသော အချက်လည်း ပါဝင်သည်။
၂၀၁၅ အောက်တိုဘာလတွင် ကာတာ အီမာစော်ဘွားမှ နိုင်ငံ၏ စပွန်ဆာ စနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲချက်များကို ဥပဒေ အတွင်းသို့ လက်မှတ်ရေးထိုး ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ဥပဒေ အသစ်သည် တစ်နှစ် အတွင်း အသက်ဝင်မည် ဖြစ်သည်။ စောင့်ကြည့်ဝေဖန်သူများ ဘက်ကမူ ထိုပြောင်းလဲမှုများတွင် အချို့သော အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းရန် ပျက်ကွက်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ 
၁၉၉၉ ခု ဗဟိုမြူနီစီပါယ်ကောင်စီ ရွေးချယ်ပွဲတွင် ကာတာနိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ မဲပေးခွင့် ပြုခဲ့သည်။ ကာတာ နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ဖြစ်သော ထိုရွေးကောက်ပွဲကို ၁၉၉၉ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ နှင့် အချိန်ကိုက်၍ ကျင်းပခဲ့သည်။
ယခင် အီမာစော်ဘွား ဟာမက်ဘင် ခါလီဖာ အယ်လ် သာနီအား အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ နှင့် အတူ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရစဉ်
နယ်နိမိတ်ကြီးမားသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ရှိသည့် နိုင်ငံငယ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် ကာတာနိုင်ငံသည် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု တိုးမြှင့်ရန် ကြိုးစား သကဲ့သို့ နိုင်ငံနှင့် အုပ်ချုပ်သူ စော်ဘွား မိသားစုအားလည်း ကာကွယ်ရန် ဆောက်ရွက်သည်။  ကာတာနှင့် အခြား နိုင်ငံများ မဟာမိတ် ပြုခြင်း သမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်မည် ဆိုပါက ၎င်းတို့၏ ပေါ်လစီ အခြေခံအား ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၁၇၆၀ နှင့် ၁၇၉၁ ခုနှစ် အတွင်း လတ်တလော ဩဇာရှိသူ ဖြစ်သည့် အော့တမန်များ၊ ဗြိတိသျှများ၊ ဘာရိန်းမှ အယ်လ်ခါလီဖာ စော်ဘွားများ၊ အာရေဗျများ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျမှ ဝါဟာဘီများ အစရှိသူတို့ထံမှ တရားဝင် အစောင့်အရှောက် ရယူခဲ့သည်။ကာတာ၏ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်း အတွင်း တိုးတက်လာသော ပုံရိပ်နှင့် နိုင်ငံတကာ အရေးအခင်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်မှု အတွက် အချို့သော စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများမှ အင်အား အလယ်အလတ်ရှိသော နိုင်ငံဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ကာတာသည် အိုပက် အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် စောစီးစွာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပင်လယ်ကွေ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကောင်စီ၏ တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အာရပ်လိဂ်၏ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ ကာတာသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မဖြစ်မနေ လက်ခံသော နိုင်ငံ မဟုတ်ပေ။
ကာတာသည် နိုင်ငံခြား အင်အားကြီး နိုင်ငံများနှင့်လည်း အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေး ရှိသည်။ ကာတာသည် အမေရိကန် နှင့် ဗြိတိသျှတို့၏ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ အတွင်း စစ်ဆင်ရေးများအတွက် ပူးပေါင်း လေတပ် အခြေစိုက် စခန်း ဖြစ်သော အယ်လ် အူဒိတ် လေတပ်စခန်းကို အခြေစိုက်ခွင့် ပေးထားသည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန် နှင့် ဗြိတိသျှ တပ်တို့အား ၎င်း၏ လေတပ် အခြေစိုက်စခန်းကို အသုံးပြု၍ အီရတ် နှင့် အာဖဂန် နစ္စတန်သို့ ရိက္ခာများ တင်ပို့ခွင့် ပြုထားသည်။ ထိုသို့ မဟာဗျူဟာ ကျသော စစ်စခန်းကို အခြေစိုက်ခွင့် ပေးထားသော်လည်း ကာတာသည် အနောက်ကမ္ဘာ၏ အားကောင်းသော မဟာမိတ် မဟုတ်ပေ။ ကာတာသည် အာဖဂန် တာလီဘန်များအား နိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံရေး ရုံး ဖွင့်ခွင့် ပေးထားပြီး အီရန်နိုင်ငံနှင့်လည်း စပ်တူ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်သော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ တွင်း အပါအဝင် နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေး ရှိသည်။ နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာမှ တင်ပြသော ပေါက်ကြားလာသည့် စာရွက်စာတမ်း များ အရ ကာတာ၏ အကြမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ဆောင်ချက် မှတ်တမ်းမှာ ဒေသအတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုပေါက်ကြားလာသည့် ကြေးနန်းတွင် ကာတာ၏ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များသည် "အမေရိကန် နှင့် နီးစပ်သည်ဟု ပေါ်လွင်မည်ကို စိုးရိမ်သည်နှင့် တန်ပြန် လက်စားချေရန် ဆွပေးသည့် အဖြစ် ရောက်မည်စိုး၍ သိထားသော အကြမ်းဖက် သမားများ အပေါ်တွင် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်လေးသည်။ " ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ကာတာသည် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ ဒေသ အတွင်းရှိ ၎င်း၏ အိမ်နီးချင်းများ နှင့် အမျိုးမျိုးသော ဆက်ဆံရေး ရှိသည်။ ကာတာသည် အီရန်နှင့် ကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးထားပြီး ၎င်းတို့နှင့် အတူ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ တွင်းကိုလည်း အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၁ လစ်ဗျား ပြည်တွင်းစစ် အတွင်း လစ်ဗျား အတိုက်အခံတို့၏ အမျိုးသား ပြောင်းလဲရေးကောင်စီ အား တရားဝင် အစိုးရ အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုသည့် နိုင်ငံများတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အသိအမှတ်ပြုသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ လစ်ဗျား ပြည်တွင်းစစ် အပြီး လစ်ဗျားတွင် လွှင့်ထူထားသော ကာတာ အလံ။ ကာတာသည် အာရပ်နွေဦး တော်လှန်ရေးတွင် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု အနေနှင့် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကာတာမှ ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ အစွန်းရောက် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်သော မွတ်စလင် ဘရားသားဟုဒ် ကို ထောက်ပံ့သည့် အတွက် ဘာရိန်း၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု တို့ နှင့် ဆက်ဆံရေး တင်းမာသော အနေအထားသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။  ထိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ထိုနိုင်ငံ ၃ ခု မှ ၎င်းတို့၏ သံအမတ်များကို ကာတာမှ ၂၀၁၄ မတ်လတွင် ပြန်ခေါ်ခဲ့သည်။ 
အယ်လ်ဂျာဇီးယား အမေရိကား ၏ သတင်းအရ ယီမင်ရှိ အတိုက်အခံများကို တိုက်ခိုက်သော ဆော်ဒီအာရေဗျ ဦးဆောင်သည့် ညွန့်ပေါင်းတပ်သည် အရပ်သားများကို မခွဲခြားဘဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အပြင် အရပ်သားများ ထူထပ်စွာ ရှိနေသည့် နေရာများတွင် ဗုံးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ 
လတ်တလော နှစ်များ အတွင်းတွင် ကာတာသည် အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွများကို အသုံးပြု၍ အီဂျစ်၊ ဆီးရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ ဆိုမာလီယာ နှင့် မာလီ အပါအဝင် နိုင်ငံအချို့တွင် ၎င်း၏ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီကို တိုးမြှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မွတ်စလင် ဘရားသားဟုဒ်မှစ၍ ဆလာဖစ် အဖွဲ့များ အထိ အစရှိသော အဖွဲ့များမှ အစ္စလာမ်များ နှင့် အလွမ်းသင့်အောင် ဆက်ဆံခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏ ဩဇာကို တိုးမြှင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော အာရပ်နွေဦး တော်လှန်ရေး မှ အစပြု၍ ထိုအဖွဲ့များသည် အနာဂတ်အတွက် ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ယုံကြည်၍ ဖြစ်သည်။အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေး လက်ထောက်ဝန်ကြီး ဖြစ်သော ဒေးဗစ်ကိုဟမ် ၏ အဆိုအရ ကာတာနိုင်ငံသည် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အတွက် ခွင့်ပြုထားသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ကာတာမှ ထိုအဖွဲ့များအား ထောက်ပံ့ထားသော အထောက်အထားများရှိပြီး ဆီးရီးယား နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှ တင်းမာသော သဘောထားရှိသည် အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့များလည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။  ၂၀၁၅ ခုနှစ် လေ့လာချက် အရ သိရှိရသည်မှာ ကာတာ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ နှင့် တူရကီ နိုင်ငံတို့သည် ဆီးရီးယား ပြည်တွင်းစစ် အတွင်း အစိုးရအား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့် အဖွဲ့ခွဲတစ်ခု ဖြစ်ကာ အယ်လ်ကိုင်းဒါး အဖွဲ့နှင့် ဆက်စက်နေသည့် အယ်လ်နူစရာ တပ်ဦး နှင့် အခြား ဆလာဖစ် ညွန့်ပေါင်း အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်သော အာရာ အက်ရှမ် တို့ ပါဝင်သည်ဟု သတင်းရသည့် အာမီအော့ဖ် ကွန်ကွက်စ် အား ပွင့်လင်းစွာ ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးခဲ့ကြသည်။
ကာတာသည် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် အီဂျစ်သမ္မတဟောင်း မိုဟာမက် မော်ဆီအား သံတမန် ရေးရာ အရ လည်းကောင်း နိုင်ငံပိုင် အယ်လ်ဂျာဇီးယား မီဒီယာ ကွန်ယက် ဖြင့် လည်းကောင်း အထောက်အပံ့ ပေးခဲ့သည်မှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်း၍ ၎င်းအား မဖြုတ်ချမီ အချိန် အထိ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကာတာသည် ၎င်း အာဏာရနေစဉ် အချိန်က အီဂျစ်အား ဒေါ်လာ ၇.၅ ဘီလီယံ ထုတ်ချေးခဲ့သည်။ 
၂၀၁၂ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ကာတာသည် ပါလက်စတိုင်း ခေါင်းဆောင် ဟာမတ်စ် အား ထောက်ခံခဲ့ကြောင်း ပထမဆုံး သတင်း ထွက်ခဲ့သဖြင့်  အစ္စရေး၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အီဂျစ် နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ တို့၏ ဝေဖန်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့က "ကာတာသည် ဟာမတ်စ်ကို ထောက်ခံခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှုကို ပျက်ပြားစေသည်" ဟု စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။  သို့သော်လည်း ကာတာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးမှ ဟာမတ်စ်အား ထောက်ခံသည်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး "ကျွန်တော်တို့ ဟာမတ်စ်ကို ထောက်ခံတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါလက်စတိုင်းတွေကို ထောက်ခံတာပါ။" ဟု ဆိုခဲ့သည်။  ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက် အပြီးတွင် ကာတာသည် ဂါဇာသို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ရှိသော လူသားချင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ကာတာနိုင်ငံသည် ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ညီလာခံများစွာကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၁ ကြိမ်မြောက် ဒိုဟာ ဖိုရမ်တွင် အဓိက အတွေးအခေါ် ပညာရှင်များ၊ နောက်ခံ အမျိုးမျိုးမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များနှင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များကို ဖိတ်ကြား၍ ဒီမိုကရေစီ၊ မီဒီယာ၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ၊ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှု နှင့် အနာဂတ် ရေလုံလောက်စွာ ရရှိရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ ထိုဖိုရမ်တွင် အနာဂတ် စီးပွားရေး ညီလာခံကို အဓိကထား၍ ကျင်းပခဲ့သည်။ လတ်တလော ကာလများတွင် ကာတာမှ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ပြိုင်ဘက်များ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများကို လက်ခံ ကျင်းပ ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ဆွေးနွေးမှုမှာ ဒါဖာ သဘောတူညီချက် ဖြစ်သည်။ ဒိုဟာ ကြေငြာချက်သည် ဒါဖာ ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် အခြေခံ ဖြစ်ပြီး အာဖရိက ဒေသ တွင် သိသာလောက်သော အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသည့် အောင်မြင်မှုများတွင် လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပြန်လည် ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးတက်လာခြင်း၊ မိမိတို့ နေရပ်မှ စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လာခြင်း နှင့် ဒါဖာရှိ ပြည်သူများအား စည်းရုံးစေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် ရှေ့သို့ ဆက်လှမ်းရန် တွန်းအားပေးနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကာတာသည် ဘဏ္ဍာရေး ပြန်လည် လှုပ်ရှားရေး နှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး တို့ အတွက် ဒါဖာသို့ စတာလင်ပေါင် ၈၈.၅ သန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၊ အီဂျစ်နှင့် ယီမင်တို့မှ ကာတာအား ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး အစ္စလာမ် လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု ဖြစ်သည့် မွတ်စလင် ဘရားသားဟုဒ်ကို ထောက်ခံသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု ကြီးထွားလာပြီး ကာတာအား အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်များနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများကို ထောက်ပံ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ သံတမန်ရေးရာ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျမှ ထိုသို့ လုပ်ဆာင်ချင်းမှာ နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေး အတွက် လိုအပ်သော ဆောင်ရွက်ချက် ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။ ယီမင်ရှိ ညွန့်ပေါင်းတပ်မှလည်း ကာတာတပ်များကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အီဂျစ်မှ ၎င်း၏ လေကြောင်းနယ်နိမိတ်နှင့် သင်္ဘောဆိပ်များတွင် ကာတာအား ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ 
လစ်ဗျားနိုင်ငံ ပေါ်မှ ပျံသန်းနေသော ကာတာ၏ ဒက်ဆု မီရာ့ဂျ် ၂၀၀၀
ကာတာတပ်မတော်သည် ကာတာ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ကာတာနိုင်ငံသည် အသင့်အတင့်မျှသော စစ်အင်အားကိုသာ ထားရှိပြီး ခန့်မှန်းခြေ အမျိုးသား ၁၁,၈၀၀ ဦး ရှိကာ ကြည်းတပ်တွင် ၈,၅၀၀၊ ရေတပ်တွင် ၁,၈၀၀ နှင့် လေတပ်တွင် ၁,၅၀၀ မျှ ရှိသည်။ ကာတာ၏ ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်မှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်း အမျိုးသားထုတ်ကုန်၏ ၄.၂% ခန့်ရှိသည်။ ကာတာသည် လတ်တလောတွင် အမေရိကန် နှင့် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းတို့ နှင့် ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး အစောပိုင်း ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကလည်း ပြင်သစ်နှင့် လက်မှတ် ထိုးထားခဲ့သည်။ ကာတာသည် ပင်လယ်ကွေ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကောင်စီ၏ အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော စစ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လေ့ ရှိသည်။ အမေရိကန်နှင့် အခြား ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအချို့မှ တာဝန်ယူလည်ပတ်နေသာ အယ်လ်အူဒိတ် လေတပ် အခြေစိုက်စခန်း ရှိခြင်းသည် ကာတာနိုင်ငံ အတွက် ကာကွယ်ရေး နှင့် နိုင်ငံ လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံချက် ပေးထားသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ ကာတာရှိ အထူးတပ်ဖွဲ့များကို ပြင်သစ်နှင့် အခြား အနောက်နိုင်ငံများမှ လေ့ကျင့်ပေးထားပြီး ကျွမ်းကျင်မှု အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိရှိသည်ဟု ယုံကြည်ယူဆရသည်။  ထို့ပြင် လစ်ဗျား သူပုန်များအား ၂၀၁၁ ထရီပိုလီတိုက်ပွဲတွင်လည်း အကူအညီပေးခဲ့သည်။
စတော့ခ်ဟုမ်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး သုတေသန အင်စတီကျု (SIPRI) ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကာတာသည် ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၄ အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် လက်နက် တင်သွင်းမှု၌ အဆင့် ၄၆ ရှိသည်။ ကာတာ တွင်ရှိသော သူ၏ စစ်တပ်များကို ပုံစံပြောင်းလဲရန် နှင့် သိသာစွာ တိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ်မှာ အရှိန်မြင့်တက်လျှက်ရှိသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီမှ တင့်ကား ၆၂ စင်း နှင့် အမြောက် ၂၄ လက်ကို မှာယူပြီးနောက်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အခြား ကန်ထရိုက်စာချုပ်များကို ဆက်လက်ချုပ်ဆိုခဲ့ကာ ၎င်းတို့တွင် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ် ၂၄ စင်း၊ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး လေယာဉ် ၃ စင်း တို့ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ မှာယူခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စပိန်နိုင်ငံမှလည်း ဆီသည် လေယာဉ် ၂ စင်းကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ 
ကာတာစစ်တပ်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ ဦးဆောင်သော ယီမင်ရှိ ရှီယာ့ ဟိုသစ် အတိုက်အခံများကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အယ်လ်ဂျာဇီးယား အမေရိကား ၏ သတင်းအရ ယီမင်ရှိ အတိုက်အခံများကို တိုက်ခိုက်သော ဆော်ဒီအာရေဗျ ဦးဆောင်သည့် ညွန့်ပေါင်းတပ်သည် အရပ်သားများကို မခွဲခြားဘဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အပြင် အရပ်သားများ ထူထပ်စွာ ရှိနေသည့် နေရာများတွင် ဗုံးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အရပ်သား အများအပြား သေဆုံးခဲ့ပြီး ထိုဒေသအတွင်းရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၏ အစိတ်အပိုင်း အများအပြား ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ဆော်ဒီတို့မှ ဆေးရုံများအားလည်း ဝာာဝန်ကျသူများ ရှိနေစဉ်မှာပင် ဗုံးကြဲခဲ့သည်။ 
၂၀၀၄ ခုနှစ် မှစ၍ ပိုင်းခြားထားသော ကာတာ၏ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်များ
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကာတာနိုင်ငံအား စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ် ၇ ခုဖြင့် ပိုင်းခြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ
မက်ဒီနတ် အက် ရှာမယ်လ်
အယ်လ်ဝါခရာ တို့ ဖြစ်ကြသည်။
စာရင်းဇယား ကိစ္စရပ်များ အတွက် စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်များကို ဇုံ ၉၆ ခု အဖြစ် ထပ်မံပိုင်းခြား ထားပြီး ၎င်းတို့အား အကွက်များ အဖြစ် ဆက်လက် ပိုင်းခြားထားသည်။
ကာတာရှိ သဲကန္တာရ မြင်ကွင်း
ကာတာကျွန်းဆွယ်သည် ၁၀၀ မိုင် (၁၆၀ ကီလိုမီတာ) မျှ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ အတွင်းသို့ ထိုးထွက်လျှက် ရှိသည်။ မြောက်လတ္တီကျု ၂၄° မှ ၂၇° ကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျု ၅၀° မှ ၅၂° ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ နိုင်ငံ၏ နေရာ အတော်များများသည် နိမ့်သော ကျောက်မြေများရှိပြီး သဲများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျှက် ရှိသည်။ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ခိုးလ်အယ်လ် အဒိတ် ကုန်းတွင်း ပင်လယ်ရှိပြီး ပါရှားပင်လယ်ကွေ့ အတွင်း ဝင်ရောက်သော မြစ်လက်တက် တစ်ခုအား စီတန်းနေသာ သဲတောင်ကုန်းများဖြင့် ဝိုင်းရံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြင်းပြသော ဆောင်းရာသီနှင့် အလွန်ပူပြင်းပြီး စိုစွတ်သော နွေရာသီများ ရှိသည်။
ကာတာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး နေရာမှာ အနောက်ဘက် ဂျီဘဲလ် ဒူခန်ရှိ ကာရင် အဘူ အယ်လ်ဘော ဖြစ်ပြီး ၃၃၈ပေ (၁၀၃ မီတာ) မြင့်သည်။ ထိုနေရာမှာ ဇီခရစ်မှ အမ်ဘတ် ကို ဖြတ်၍ တောင်ပိုင်းထိ ထုံးကျောက်တုံး ပုများ ကျဲပြန့် တည်ရှိနေသော နေရာ ဖြစ်သည်။ ဂျီဘဲလ်ဒူခန်သည် ကာတာရှိ အဓိက ကုန်းတွင်း ရေနံ ထွက်ရှိရာ ဒေသလည်း ဖြစ်ပြီး သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့တွင်းများမှာ ကျွန်းဆွယ် အနောက်မြောက်ဘက် ကမ်းလွန်တွင် တည်ရှိသည်။
ဇီဝမျိုးကွဲများ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ကာတာသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်တွင် ရိုင်ယို ဇီဝ မျိုးကွဲများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင် ထို သဘောတူညီချက်၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။  ထို့နောက်တွင် အမျိုးသား ဇီဝမျိုးကွဲဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် ဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် မေ ၁၈ တွင် သဘောတူညီချက် အဖွဲ့သို့ တင်ပြခဲ့သည်။ ကာတာတွင် မှိုမျိုးကွဲပေါင်း ၁၄၂ မျိုးကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။  လတ်တလောတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေထားသော စာအုပ်တွင် ကာတာ တွင် သိရှိသော သို့မဟုတ် ရှိမည်ဟု ယုံကြည်ရသော ပုတ်သင်ညိုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး နိုင်ငံတကာမှ သိပ္ပံပညာရှင်များ နှင့် အခြားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သူများ အဖွဲ့မှ စစ်တမ်း ကောက်ယူထားခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုမျှ ကြာအောင်ပင် ကာတာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက်ဒ် အများဆုံး ထုတ်လွှတ်သော နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လူတစ်ဦးလျှင် ၄၉.၁ မက်ထရစ်တန်မျှ ထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်။  ထို့ပြင် ကာတာနိုင်ငံသားများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ဦးချင်း ရေသုံးစွဲမှု အများဆုံး ဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦးလျှင် လီတာ ၄၀၀ ခန့်မျှ သုံးစွဲကြသည်။ 
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကာတာသည် နိုင်ငံတော် မျှော်မှန်းချက် ၂၀၃၀ ကို စတင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ထို မျှော်မှန်းချက်များတွင် နောက် ဆယ်စုနှစ် ၂ ခု အတွင်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိက ပန်းတိုင် ၄ ခု ထဲမှ တစ်ခု အဖြစ် အသားပေး ဖော်ပြထားသည်။ နိုင်ငံတော် မျှော်မှန်းချက်မှ ဒေသတွင်း နှင့် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် ရေနံကို အခြေခံသော စွမ်းအင်မှ အခြား အနာဂတ်အတွက် မထိခိုက်ပဲ လက်ရှိ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းသော အစားထိုး စွမ်းအင်များကို ဖော်ဆောင်ရန် လည်း ကတိပြုထားသည်။ 
Qatar အတွက် ရာသီဥတု အချက်အလက်များ
ကာတာမှ တင်ပို့သော ကုန်ပစ္စည်းများကို အရောင် ၂၈မျိုး ခွဲထားသော ဂရပ်ဖ်ဖြင့် ပြထားပုံ (၂၀၁၁)
ဒိုဟာမြို့၏ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ရပ်ဝန်း
ရေနံကို ရှာဖွေ မတွေ့ရှိမီ အချိန်အထိ ကာတာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း နှင့် ပုလဲရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းများပေါ်တွင် အခြေခံခဲ့သည်။ ၁၈၉၂ ခုနှစ် အော့တမန် အင်ပိုင်ယာ၏ ဘုရင်ခံများ ရေးသားသော အစီရင်ခံစာ အရ ၁၈၉၂ ခုနှစ် ပုလဲ ရှာဖွေရေး မှ ရသော ဝင်ငွေမှာ ကရန်ငွေ ၂,၄၅၀,၀၀၀ မျှ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။  ၁၉၂၀ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၃၀ ခုနှစ်များတွင် ဂျပန်တို့၏ မွေးပုလဲများ ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ချိန်တွင် ကာတာ၏ ပုလဲလုပ်ငန်း ပျက်သုဉ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ကာတာရှိ ဒူခန် ရေနံတွင်းတွင် ရေနံ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရေနံ ရှာဖွေ တွေ့ရှိမှုသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အခုအချိန်တွင် နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင် နိုင်ငံသားများအတွက် လူနေမှု အဆင့်အတန်း အလွန်မြင့်မားသည်။ ဝင်ငွေခွန် မကောက်ခံ သဖြင့် ကာတာ သည် ဘာရိန်း နိုင်ငံနှင့် အတူ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အခွန် အနည်းဆုံး နိုင်ငံများတွင် တစ်နိုင်ငံ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၀.၁ % ဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီ ဥပဒေ အရ နိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမဆို ကာတာနိုင်ငံသားများမှ ၅၁% ပိုင်ဆိုင်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အရ ကာတာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း အလိုက် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန် အဆင့် စတုတ္တနေရာ ၌ ရှိသည်။နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရန် နိုင်ငံခြားသာ အလုပ်သမားများ အပေါ်တွင် အကြီးအကျယ် မှီခိုအားထားသည့်အတွက် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားမှာ နိုင်ငံလူဦးရေ ၏ ၈၆% နှင့် အလုပ်လုပ်သူ၏ ၉၄% အထိ ရှိသည်။  ကာတာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆိုးရွားဆုံး လုပ်ငန်းခွင် ရှိရာ နေရာ အဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂမှ ဝေဖန်ခြင်း ခံရသည်။ ကာတာ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုမှာ ရေနံထွက် ပစ္စည်း နှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်း အပေါ်တွင်သာ လုံးဝနီးပါး အခြေခံပြီး ၁၉၄၀ တွင် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။  ကာတာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဓာတ်ငွေ့ရည် အများဆုံး တင်ပို့ ရောင်းချသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။  ၂၀၁၂ ခုနှစ် ခန့်မှန်းချက် အရ ကာတာသည် နောင် ဆယ်နှစ် အတွင်း စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၌ ဒေါ်လာ ၁၂၀ ဘီလီယံမျှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။  ရေနံတင်ပို့ ရောင်းချသော နိုင်ငံများ အဖွဲ့ (အိုပက်) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင်ခဲ့သည်။
ကာတာနိုင်ငံသည် လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ အရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံ အဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ ကို ကျော်တက်၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ၃ နှစ်ဆက်တိုက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဝါရှန်တန်တွင် အခြေစိုက်သော နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး အင်စတီကျု၏ ထုတ်ပြန်သော လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအား ကွာခြားမှုနှုန်း ထည့်တွက်ပြီး ကာတာ၏ ၂၀၁၀၂ ခုနှစ် လူတစ်ဦးချင်း ဂျီဒီပီမှာ ဒေါ်လာ ၁၀၆,၀၀၀ (ကာတာငွေ ၃၈၇,၀၀၀) ဖြစ်သဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံ အဆင့်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့သည်။ လူဇင်ဘတ်သည် ဒေါ်လာ ၈၀,၀၀၀ ဖြင့် ဒုတိယ နေရာတွင် ပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီး စင်ကာပူ နိုင်ငံမှာ လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ ၆၁,၀၀၀ ဒေါ်လာဖြင့် တတိယ နေရာတွင် ရှိခဲ့သည်။ ထိုသုတေသနမှာ ကာတာ၏ ဂျီဒီပီအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၁၈၂ ဘီလီယံ ဒေါ်လာဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့မှု များပြားခြင်း နှင့် ရေနံဈေး မြင့်တက်ခြင်းတို့ကြောင့် အမြင့်ဆုံး နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကာတာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ၁.၈ သန်း ဖြစ်သည်။ ထို လေ့လာချက်မှပင် ကာတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အာဏာပိုင် အဖွဲ့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအား ၁၁၅ ဘီလီယံဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၂ ခုမြောက် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်သော ကာတာ ရင်းနီးမြှုပ်နှံမှု အာဏာပိုင် အဖွဲ့သည် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား အထူးပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းမှ ဘီလီယံ နှင့် ချီသော ဒေါ်လာ အပိုငွေများကြောင့် ကာတာ အစိုးရသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပ နှင့် အာရှ ပစိဖိတ် ဒေသတို့တွင် တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ထိုဦးပိုင် ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံ မျှ ရှိသည်။ ကာတာ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီသည် ကာတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အာဏာပိုင် အဖွဲ့၏ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့ခွဲ ဖြစ်သည်။ ကာတာ ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတော်မှ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၃၀ မှ ၄၀ အထိ ရရှိသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမြောက်အများ ရှိပြီး ဗယ်လင်တီနို၊ ဆီးမန်း၊ ပရင်တမ့်၊ ဟားရော့ဒ်၊ သည်ရှတ်ဒ်၊ ဘာကလေဘဏ်၊ ဟိသရိုးလေဆိပ်၊ ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း ဘောလုံး အသင်း၊ ဗော့စ်ဝက်ဂွန် ဂရု၊ ရွိုင်ရယ်လ်ဒတ်ချ်ရှဲလ်၊ အမေရိကန်ဘဏ်၊ တစ်ဖနီ ၊ တရုတ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ စိန်းဘူရီ၊ ဘလက်ဘယ်ရီ  နှင့် ဆန်းတန်ဒါ ဘရာစေး တို့တွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ 
ကာတာနိုင်ငံတွင် အခွန်ကောက်ခံခြင်း မရှိပေ။ သို့သော်လည်း အာဏာပိုင်များက ကျန်းမာရေး နှင့် မညီညွတ်သော အစားအစာများနှင့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို အခွန်ကောက်ခံရန် အစီအစဉ်ကို ကြေငြာထားသည်။ အခွန်အခများကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်အား ထိခိုက်စေသာ ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် အမြန်ချက် အစားအစာများ၊ ဆေးရွက်ကြီးနှင့် ဆက်စပ်သော ပစ္စည်းများ နှင့် အချိုရည်များတွင် ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။ ထို့သို့ စတင် အခွန်ကောက်ခံရခြင်းမှာ ရေနံဈေး ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်တွင် လိုငွေ ပြမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၆ မှစ၍ ရေနံ ကုမ္ပဏီများ နှင့် အခြား အစိုးရ ဌာနများတွင် အလုပ်သမား လျှော့ချခြင်းကို တွေ့မြင်ရသည်။ 
ကာတာ လေကြောင်းလိုင်း ၏ အဲယားဘတ်စ် A380၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး လေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုဖြစ်သော ကာတာလေကြောင်းလိုင်းသည် ဒိုဟာမြို့မှ နိုင်ငံတကာရှိ မြို့ပေါင်း ၁၅၀ မြို့သို့ ဆက်သွယ်ထားသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကာတာတွင် စုစုပေါင်း ရေနံစည်ပေါင်း ၁၅ ဘီလီယံ စည် မျှ ကျန်ရှိနေပြီး ၎င်း၏ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှာ တကမ္ဘာလုံးရှိ ရင်းမြစ်၏ ၁၃% မျှ ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း အလိုက် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူ လူ ၂ သန်းတွင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်းအောက် နေထိုင်သူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘဲ လူဦးရေ၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သည်။
ကာတာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး သည် ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၉ ကြားတွင် ကျဆင်းခဲ့သည်။ အိုပက်၏ ရေနံစိမ်း ထုတ်လုပ်ရေး အတွက် ဝေစု သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရေနံဈေး ကျဆင်းခြင်း နှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် အလားအလာ မကောင်းသော နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်၏ အခြေအနေတို့ကြောင့် ရေနံမှ ရငွေ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကျဆင်းနေသာ ဝင်ငွေ နှင့် အညီ အစိုးရ၏ အသုံးစရိတ် အစီအစဉ်များကိုလည်း လျှော့ချခဲ့ရသည်။ အကျိုးဆက်ကြောင့် ဖြစ်လာသော ပြည်တွင်း စီးပွားရေး အခြေအနေကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များစွာတို့မှာ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများကို လျှော့ချ ထုတ်ပယ်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် စီးပွားရေး ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာပြီးနောက် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်များပြားလာခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အီဂျစ်နိုင်ငံ နှင့် တောင်အာရှ နိုင်ငံများမှ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည်။
ရေနံ ထုတ်လုပ်မှုမှာ အများဆုံး ထုတ်လုပ်နေသည့် ပမာဏ ဖြစ်သည့် တစ်နေ့လျှင် ရေနံစည် ၅၀၀,၀၀၀ စည် (၈၀,၀၀၀ ကုဗမီတာ) တွင် ကြာရှည်စွာ ရှိနေလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ရေနံတွင်းများမှာ ၂၀၂၃ သို့ရောက်လျှင် ကုန်ခမ်းသွားနိုင်သည့် အနေအထား ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ကြီးမားသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက် တစ်ခုသည် ကာတာ၏ အရှေ့မြောက် ကမ်းရိုးတန်းတွင် တည်ရှိနေသည်။ ကာတာ အနေနှင့် ထို ဓာတ်ငွေ့တွင်းမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယ အကြီးမားဆုံး ဖြစ်ပြီး ၂၅၀ ထရီလီယံ ကုဗပေ (၇,၀၀၀ ကုဗ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှိကြောင်း သက်သေပြထားခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ၁.၅ ဘီလီယံ ရှိသော မြောက်ပိုင်း ဓာတ်ငွေ့တွင်း တည်ဆောက်မှု၏ ပထမအဆင့် ပြီးစီး သွားခဲ့သဖြင့် စီးပွားရေး တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ကာတာဂက်စ် စီမံကိန်းမှ ဂျပန်သို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည် စတင် တင်ပို့ခဲ့သည်။ မြောက်ပိုင်း ဓာတ်ငွေ့တွင်း ၏ ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်း မြောက်များစွာ တန်သော နောက်ထပ် အဆင့်များမှာ စီစဉ်နေသော အဆင့်နှင့် တည်ဆောက်နေသော အဆင့်တွင် ရှိသည်။
အွမ်ဆက်တွင် အခြေစိုက်သော ကာတာ၏ အကြီးစား စက်မှု လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများတွင် တစ်နေ့လျှင် ရေနံစိမ်း စည် ၅၀,၀၀၀ မျှ ကို သန့်စင်နိုင်သော ရေနံချက် စက်ရုံ၊ ယူရီးယား နှင့် အမိုးနီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ စက်ရုံ၊ စတီး စက်ရုံ နှင့် ရေနံဓာတု စက်ရုံ တို့ပါဝင်သည်။ ထို စက်မှု လုပ်ငန်းများ အားလုံးတွင် လောင်စာဆီ အတွက် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုကြသည်။ အများစုသော စက်ရုံများမှာ နိုင်ငံပိုင် ကာတာ အထွေထွေ ရေနံ ကော်ပိုရေးရှင်း (ကျူဂျီပီစီ) နှင့် ဥရောပ သို့မဟုတ် ဂျပန် ကုမ္ပဏီများ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သည် ကာတာ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းသို့ အဓိက စက်ပစ္စည်း ရောင်းချသူ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများသည် မြောက်ပိုင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်းတွင် အဓိက နေရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်လျှက် ရှိသည်။
ကာတာ၏ အမျိုးသား မျှော်မှန်းချက် ၂၀၃၀ အရ လာမည့် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု အတွင်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သော ရင်းမြစ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အချက်ကို နိုင်ငံ၏ အဓိက ပန်းတိုင် အဖြစ် မျှော်မှန်းထားသည်။ ကာတာသည် ကာတာရိုက်ဇေးရှင်း ဟုခေါ်သော အစီအစဉ်ကို အပြင်းအထန် လုပ်ဆောင်ပြီး ထို အစီအစဉ်အရ ဖက်စက် လုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရ ဌာနများတွင် ကာတာ နိုင်ငံသားများ ဩဇာအာဏာကြီးသော ရာထူးနေရာများသို့ ရောက်ရှိရန် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ကျောင်းများတွင် ဘွဲ့ရသူများ အပါအဝင် နိုင်ငံခြား၌ ပညာသင်လာသော ကာတာ နိုင်ငံသားများမှာ အိမ်သို့ ပြန်လာကြပြီး ယခင်က နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ထားသော အဓိကရာထူးနေရာများကို ရယူကြသည်။ နိုင်ငံခြား ဝန်ထမ်းများ များပြားလာသည်ကို ထိန်းချုပ်ရန် အတွက် ကာတာသည် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သော စီမံခန့်ခွဲမှုများကို လတ်တလော နှစ်များ အတွင်း တင်းကြပ်လာခဲ့သည်။ ကာတာ၏ တင်းကျပ်သော လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး စည်းမျဉ်း နှင့် နည်းဥပဒေများတွင် လုံခြုံရေးသည် အဓိက အကြောင်းအချက် အဖြစ် ပါဝင်သည်။
ဒိုဟာမြို့၏ ကောင်းကင်နောက်ခံ မြင်ကွင်း
ကာတာသည် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အပေါ်တွင် အလွန်အမင်း မှီခိုနေသောကြောင့် နိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ရာသီအလိုက် အပြောင်းအလဲ ရှိသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ကာတာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ၂.၆ သန်းမျှ ရှိပြီး ၃၁၃,၀၀၀ ဦး (၁၂%) မှာ ကာတာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ပြီး ၂.၃ သန်းမှာ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည်။ အာရပ်မဟုတ်သော နိုင်ငံခြားသားများမှာ ကာတာ လူဦးရေ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားများမှာ အကြီးဆုံး အစုအဝေး ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၆၅၀,၀၀၀ မျှ ရှိကာ  အခြားသော နိုင်ငံသားများတွင် နီပေါ နိုင်ငံသား ၃၅၀,၀၀၀ ဦး ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၂၈၀,၀၀၀ ဦး၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ၂၆၀,၀၀၀ ဦး၊ အီဂျစ်နိုင်ငံသား ၂၀၀,၀၀၀ ဦး၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသား ၁၄၅,၀၀၀ ဦးနှင့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသား ၁၂၅,၀၀၀ ဦး မျှ ပါဝင်သည်။
ကာတာ၏ ပထမဆုံး လူဦးရေစာရင်းကို ၁၈၉၂ တွင် ကောက်ခံခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း အော့တမန် ဘုရင်ခံများမှ ကောက်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို လူဦးရေ စာရင်းအရ မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်သော လူဦးရေသာလျှင် ပါဝင်ပြီး ၁၈၉၂ တွင် လူဦးရေ ၉,၈၃၀ ဦး ရှိသည်။
Source: ကာတာ စာရင်းအင်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (၁၉၀၄-၂၀၀၄) ၂၀၁၀ လူဦးရေစာရင်း ၂၀၁၃ ခန့်မှန်း ၂၀၁၆
၂၀၁၀ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်းအရ လူဦးရေ ၁,၆၉၉,၄၃၅ ဦးဟု ကောက်ခံရရှိခဲ့သည်။  ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကာတာ စာရင်းအင်း အာဏာပိုင် အဖွဲ့မှ နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း လူဦးရေအား ၁,၉၀၃,၄၄၇ ဦးဟု ခန့်မှန်းခဲ့ပြီး ၎င်းတို့တွင် အမျိုးသား ၁,၄၀၅,၁၆၄ ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ၄၉၈,၂၈၃ ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ် ပထမဆုံး ကောက်ခံသော လူဦးရေ စာရင်းတွင် လူဦးရေ ၁၁၁,၁၃၃ ဦး ရှိသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၆၀၀,၀၀၀ မျှသာရှိသော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု အတွင်း လူဦးရေ ၃ ဆ တက်လာခဲ့ပြီး ကာတာ နိုင်ငံသားများအား စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၏ ၁၅% အထိ လျော့နည်းသွားစေခဲ့သည်။ အမျိုးသား အလုပ်သမား အများအပြား ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် ကျားမ လူဦးရေ အချိုးအစား ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ လူဦးရေ၏ ၄ပုံ ၁ပုံမျှသာ ရှိတော့သည်။
ကာတာစာရင်းအင်း အာဏာပိုင် အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကာတာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ ၂၀၂၀ တွင် ၂.၈ သန်း အထိ ရောက်ရှိလာနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကာတာ၏ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၁-၁၆) တွင် ကာတာ၏ လူဦးရေသည် ၂၀၁၃ တွင့် ၁.၇၈ သန်း၊ ၂၀၁၄ တွင် ၁.၈၁ သန်း၊ ၂၀၁၅ တွင် ၁.၈၄ သန်း၊ ၂၀၁၆ တွင့် ၁.၈၆ သန်းမျှ ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး နှစ်စဉ် တိုးတက်မှုနှုန်းမှာ ၂.၁% မျှသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံ၏ လူဦးရေသည် ၂၀၁၂ အကုန်တွင် ၁.၈၃ သန်းသို့ မတန်ဆ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ကနှင့် ယှဉ်လျှင် ၇.၅% မျှ တိုးတက်မှု ရှိသည်။ ကာတာ၏ လူဦးရေသည် ၂၀၁၅ တွင် ၂.၄၆ သန်းဖြင့် စံချိန်တင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်လူဦးရေမှ ၈.၅% တိုးတက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ အစိုးရ၏ ခန့်မှန်းမှုထက် သိသာစွာပင် များပြားသည်။
ကာတာ၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု (၂၀၁၀)
အစ္စလာမ်ဘာသာသည် ကာတာတွင် ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများသော ဘာသာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် ဘာသာ အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခြင်း ခံရသည်။ ကာတာ နိုင်ငံသား အများစုသည် ဝါဟတ်မွတ်စလင်ဂိုဏ်း မှ ဆလာဖီ မွတ်စလင် ယုံကြည်မှုတွင် ပါဝင်ကြပြီး ကာတာရှိ မွတ်စလင် ၂၀%မှာ ရှီယာ့ အစ္စလာမ် ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြကာ အခြား မွတ်စလင် ဂိုဏ်းများတွင် ပါဝင်သူများမှာ အလွန်နည်းပါးသည်။ ကာတာရှိ ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ရှာရီယာ ဥပဒေမှာ နိုင်ငံတော်ဥပဒေ၏ အဓိကရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူများမှာ နိုင်ငံခြားသား များသာ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ခရစ်ယာန်များသည် အစိုးရမှ လှူဒါန်းသော မြေနေရာများပေါ်တွင် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ တည်ဆောက်ခွင့် ရရှိခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံခြား သာသနာပြုများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကိုမူ အစိုးရမှ အားမပေးပေ။ လက်ရှိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများမှာ မာသိုမာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ မလန်ကာရာ အောသိုဒေါက်စ် ဆီးရီးယန်း ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ရိုမန်ကက်သလစ် အာဝါလေဒီအော့ဖ် ရိုစရီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း နှင့် အန်ဂလိကန် အက်ပီဖနီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။  ထို့မျှသာမက မော်မွန်ဝါ့ဒ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၂ ခုလည်း ရှိသည်။
အာရပ်ဘာသာစကားသည် ကာတာနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံးဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး ဒေသသုံးစကားဖြစ်သော ကာတာ အာရပ်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုကြသည်။ ကာတာ လက်ဟန်ခြေဟန် ဘာသာစကားကို နားမကြားသူများ အသိုင်းအဝန်းတွင် အသုံးပြုကြသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအား ဒုတိယဘာသာစကား အဖြစ် အသုံးများပြီး အထူးသဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင် ကြားခံဘာသာစကား အဖြစ် အသုံးများလာသည်မှာ အာရပ်ဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၏ ဝါးမြိုမှုမှ လွတ်မြောက်ရန် အတွက် စတင်ကာကွယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာရသည် အထိပင် ဖြစ်သည်။  ကာတာရှိ များပြားလှစွာသော နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်း အသိုင်းအဝန်းတွင် ဆက်သွယ်ရန် အတွက် အင်္ဂလိပ် ဘာသာသည် အသုံးဝင်သော ဘာသာစကား တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုများစွာ စုစည်းနေသာ နိုင်ငံတစ်ခု၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ အနေနှင့် အခြားသော ဘာသာစကား များစွာတို့ကို ပြောဆိုကြပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် ဆင်ဟာ၊ ဘင်္ဂါလီ၊ တာဂါးလော့ နှင့် ဘဟာဆား အင်ဒိုနီးရှားတို့လည်း ပါဝင်သည်။
၂၀၁၂ တွင် ကာတာသည် နိုင်ငံတကာ ပြင်သစ်စကားပြော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော လာဖရန်ကိုဖုန်းနီ (အိုအိုင်အက်ဖ်) အဖွဲ့အား အဖွဲ့ဝင် အသစ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြင်သစ်နေ့စဉ် သတင်းစာမှ ပြင်သစ်စကားပြောသူ အနည်းငယ်မျှသာ ရှိသော ကာတာနိုင်ငံသည် အိုအိုင်အက်ဖ် အဖွဲ့သို့ မည်သည့် ပံ့ပိုးမှုမှ မပြုလုပ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး အိုအိုင်အက်ဖ်မှ လတ်တလော ထွက်ခွာသွားသော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မကျေနပ်ချက်များကို ပြောကြားသည်မှာ ကာတာသည် အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်စဉ်က ပေးခဲ့သော ကတိများကို စောင့်ထိန်းခြင်း မရှိရုံသာမက နှစ်စဉ် အသင်းဝင်ကြေးကိုလည်း ပေးအပ်ခြင်း မရှိဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ကာတာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုသည် အခြား အရှေ့အာရေဗျတွင် ရှိသော နိုင်ငံများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆင်တူပြီး အစ္စလာမ် ၏ လွမ်းမိုးမှု သိသာစွာ ရှိသည်။ နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ကျင်းပသော ကာတာအမျိုးသားနေ့မှာ နိုင်ငံ၏ စရိုက်လက္ခဏာကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ထိုနေ့အား ဂျာဆင်ဘင် မိုဟာမက် အယ်လ်သာနီ နန်းတက်သောနေ့ နှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အမျိုးမျိုးသော မျိုးနွယ်စုများကို စုစည်းရန် ၎င်း၏ ကြိုးပမ်းမှုတို့ကို အမှတ်ရသော အားဖြင့် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဟာမက် ဘင် အဘဒူ အာဇစ် အယ်လ် ကာဝါရီသည် ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့် အမွေအနှစ် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒိုဟာရှိ အစ္စလာမ် အနုပညာ ပြတိုက်
ကာတာအား အုပ်စိုးသော မိသားစုဖြစ်သည့် အယ်လ်သာနီ မိသားစုမှ လူကြီးများသည် အစ္စလာမ် ခေတ်ပေါ် အနုပညာလက်ရာများကို စုဆောင်းသူများ အဖြစ် ထင်ရှားသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သော အစ္စလာမ် အနုပညာ ပြတိုက်အား ဒေသအတွင်း အကောင်းဆုံး ပြတိုက် တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ ထိုပြတိုက်နှင့် အာရပ်မော်ဒန် အနုပညာ ပြတိုက် အပါအဝင် အခြား ပြတိုက်များမှာ ကာတာ ပြတိုက် အာဏာပိုင် အဖွဲ့၏ အောက်တွင် ရှိပြီး ထိုအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သူမှာ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်သူ စော်ဘွား၏ ညီမ နှင့် အနုပညာ ပစ္စည်း စုဆောင်းရာတွင် ထင်ရှားသူ အယ်လ် မာယက်ဆာ ဘင့် ဟာမက် ဘင် ခါလီဖာ အယ်လ်သာနီ နှင့် အနုပညာ အားပေးသူ ရှိတ်စော်ဘွား ဟာဆန်ဘင် မိုဟာမက် အယ်လ်သာနီ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ကာတာ ပြတိုက် အာဏာပိုင် အဖွဲ့သည် တာကာဟာရှီ မူရာကာမီ၏ ဗာဆိုင်း ပြပွဲ (၂၀၁၀) နှင့် ဒေမီယန် ဟတ်စ် ၏ လန်ဒန် ပြပွဲ (၂၀၁၂) အစရှိသည်တို့ကိုလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သည်။
ကာတာသည် ကမ္ဘာ့ အနုပညာ ဈေးကွက်တွင် တန်ဖိုးအားဖြင့် အများဆုံး ဝယ်ယူသူ ဖြစ်သည်။ကာတာ၏ အနုပညာ ကဏ္ဍသည် ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းဖြင့် ကမ္ဘာက သိလာသော နိုင်ငံတစ်ခု အနေနှင့် ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်ရန် အတွက် ဦးတည် လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ကာတာ သတင်းချန်နယ် တစ်ခုဖြစ်သော အဲလ် ဂျာဇီးယား အင်္ဂလိပ်၏ ရုံးခန်း
ဖရီးဒမ်းဟောက်စ် ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သတင်းစာလွတ်လပ်မှု အစီရင်ခံစာ အရ ကာတာ မီဒီယာအား "လွတ်လပ်မှုမရှိ" ဟု အဆင့်သတ်မှတ်သည်။  ကာတာနိုင်ငံတွင် ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ၁၉၇၀ တွင် စတင်ခဲ့သည်။  အဲလ် ဂျာဇီးယား သည် အဓိက ရုပ်မြင်သံကြား ကွန်ယက်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကာတာနိုင်ငံ ဒိုဟာမြို့တွင် ရုံးချုပ် တည်ရှိသည်။ အယ်ဂျာဇီးယားသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အာရပ် သတင်း နှင့် လက်ရှိ အဖြစ်အပျက်များ ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တု ရုပ်မြင်သံကြား ချန်နယ် တစ်ခု အဖြစ် အစပြုခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင် အယ်ဂျာဇီးယား မီဒီယာ ကွန်ယက် ဟု အမည်ရသော အထူးပြု ရုပ်မြင်သံကြား ချန်နယ်များကို ထုတ်လွှင့်လျှက် ရှိသည်။
သတင်းသမားများသည် မိမိဘာသာ ဆင်ဆာ ပြုလုပ်ရသည်ဟု ဆိုကြပြီး အထူးသဖြင့် အစိုးရ နှင့် ကာတာ၏ အုပ်ချုပ်သူ မိသားစု နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များတွင် ဖြစ်သည်။  မီဒီယာများတွင် အစိုးရ၊ အီမာစော်ဘွား နှင့် အုပ်ချုပ်သူ မီဒီယာများအား ဝေဖန်ခြင်းမှာ ဥပဒေနှင့် မညီပေ။ သတင်းစာ ဥပဒေ အပိုဒ် ၄၆ တွင် "ကာတာနိုင်ငံ၏ အီမာစော်ဘွား အား ဝေဖန်ခြင်း မပြုရန်နှင့် ၎င်း၏ ရုံးမှ မန်နေဂျာ ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ မည်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမှ မဖော်ပြရန်" ဟု ရေးသားထားသည်။ သတင်းစာသမားများသည် အစ္စလာမ်ဘာသာကို စော်ကားမှုကြောင့်လည်း တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရတတ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဆိုင်ဘာရာဇဝတ်မှုများ တားမြစ်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုဥပဒေသည် သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို တားမြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြပြီး ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပျက်ပြားစေမှု နှင့် သတင်းမှားများကို ထုတ်ဝေမှု အစရှိသော ကျယ်ပြန့်လှသော အကြောင်းအချက်များတွင် ထောင်ဒဏ် နှင့် ငွေဒဏ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ပင်လယ်ကွေ့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့မှ ထိုဥပဒေသည် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို ခြိမ်းခြောက်သည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး ဥပဒေ အတွင်းမှ အချို့သော အပိုဒ်များကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ 
ပုံနှိပ် မီဒီယာ ကဏ္ဍသည် လတ်တလော နှစ်များ အတွင်း တိုးချဲ့လာခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိ ကာတာတွင် ထုတ်ဝေနေသော သတင်းစာ ၇ စောင် ရှိပြီး ၄ စောင်မှာ အာရပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေကာ ၃ စောင်မှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေလျှက် ရှိသည်။  ထို့ပြင် အိန္ဒိယ၊ နီပေါ နှင့် သီရိလင်္ကာမှ သတင်းစာများကိုလည်း ကာတာအတွက် ပုံနှိပ်မှု အဖြစ် ထုတ်ဝေခြင်းများလည်း ရှိသည်။
ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ နှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖိုရမ်၏ ကွန်ယက်အသင့်ဖြစ်မှု ညွှန်းကိန်း အရ ကာတာသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများတွင် အမြင့်ဆုံး အဆင့် ရှိသည်။ ထိုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်မှာ နိုင်ငံ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကာတာသည် ၂၀၁၄ ညွှန်းကိန်းတွင် ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၂၃ ရှိပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှ မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ 
ကာတာနိုင်ငံ၏ ဂီတသည် ဘက်ဒိုယင်း ကဗျာ၊ သီချင်းနှင့် အကတို့ အပေါ်တွင် အခြေတည်သည်။ ရိုးရာ အကများကို ဒိုဟာတွင် သောကြာနေ့ နေ့လယ်၌ ကပြဖျော်ဖြေလေ့ ရှိသည်။ ထို အကများထဲမှ တစ်ခုမှာ အာဒါ ဟု ခေါ်ပြီး အတန်း နှစ်တန်း ရှိသော ကချေသည်များမှာ တိုက်ခိုက်မှု ပုံစံ ကကွက်ဖြင့် ဖျော်ဖြေကြပြီး ၎င်းတို့ ကခုန်ရာတွင် အယ်လ်ရက်စ် (မီးတောက်ဖြင့် သားရေပြားကို အပူပေးထားသော ဗုံကြီး တစ်မျိုး)၊ တမ်ဘိုရင်း နှင့် လင်ကွင်း နှင့် ဗုံအသေးလေးများ ဖြင့် ဝိုင်းဝန်း တီးခတ်ကြသည်။ ရိုးရာ ဂီတများတွင် အခြားအသုံးပြုသော ဗုံများမှာ ဂါလာဟု ခေါ်သော ရွှံ့ကရားရှည်၊ တပ်စ် သို့ တာဆပ် ဟုခေါ်သော ဒန် သောက်ရေခွက် နှင့် အတူ တုတ်ဖြင့် တီးခတ်ရသော တက်ဘ် ဟု ခေါ်သည့် ဗုံရှည်တို့ ဖြစ်သည်။  ကြိုးတပ် တူရိယာများ ဖြစ်ကြသော အုဒ် နှင့် ရီဘာဘာ တို့ကိုလည်း အသုံးများကြသည်။
၂၀၁၅ ကာတာ အမျိုးသမီး စက်ဘီးစီး ပြိုင်ပွဲ
ဘောလုံး ကစားခြင်းသည် ကာတာ၌ ကစားသမား နှင့် ပရိသတ် တို့အကြား ရေပန်းစားသော ကစားနည်း ဖြစ်သည်။  ၁၉၈၁ ခုနှစ် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား လူငယ် ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲတွင် ကာတာ အသက် ၂၀ အောက် အမျိုးသား ဘောလုံး အသင်းသည် အနောက်ဂျာမနီကို ၄ ဂိုး - ၀ ဖြင့် ရှုံးနိမ့်၍ ဒုတိယ နေရာ ရခဲ့ဖူးသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကာတာသည် အာရှ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက် အာရှဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအား အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို ပြိုင်ပွဲသည် ကာတာအနေနှင့် ဒုတိယ အကြိမ် အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခင်က ၁၉၈၈ တွင် ပထမ အကြိမ် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့ဖူးသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ကာတာ အနေနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲသို့ တစ်ကြိမ်မျှ တက်ရောက်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိသော်လည်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားအား အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန် အတွက် ၎င်းတို့၏ အဆိုပြုချက် အောင်မြင်ခဲ့သည်။  ကာတာရှိ ပွဲစီစဉ်သူများသည် ထိုပြိုင်ပွဲအတွက် အားကစားရုံ အသစ် ၉ ခု တည်ဆောက်ရန် နှင့် လက်ရှိ အားကစားရုံ ၃ ခုအား ချဲ့ထွင်ရန် စီစဉ်လျှက် ရှိသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားအား အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့် ရရှိခြင်း အတွက် ပါရှား ပင်လယ်ကွေ့ ဒေသမှ စိတ်အား တက်ကြွစွာ ကြိုဆိုကြပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများထဲတွင် ထိုသို့ အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပခွင့်ရခြင်းသည် ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ဖြစ်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့ ကျင်းပခွင့် ရခြင်း အတွက် အငြင်းပွားမှုများစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လာဘ်ပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံရပြီး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကို စုံစမ်းရာတွင်လည်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။ ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်များမှလည်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကာတာတွင်ကျင်းပရခြင်း အတွက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ထိုအကြောင်းများထဲတွင် ပူနွေးသော အပူချိန်ကြောင့် ကစားသမားများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိခိုက်နိုင်သည် ဆိုသော အချက်နှင့် အကယ်၍ ဆောင်းရာသီတွင် ကျင်းပမည် ဆိုပါက ဥရောပ ဘောလုံးကလပ်ပြိုင်ပွဲများတွင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်သည် ဆိုသော အချက်တို့ ပါဝင်သည်။  ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလတွင် ကာတာ ဘောလုံးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ မိုဟာမက် ဘင် ဟန်မန်အား ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများကို ပေါင် ၃သန်း လာဘ်ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အဆိုပြုချက်ကို ထောက်ခံစေသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။သို့သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် ဖီဖာမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို စစ်ဆေးရာတွင် ကာတာသည် မှားယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ မလုပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ 
ကာတာ အီမာစော်ဘွား ဖလား ၂၀၀၉
ဗြိတိသျှ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်သော ဂါးဒီးယန်း သတင်းစာမှာ "၂၀၂၂ ခုနှစ် အဲမရိတ်အတွင် ပြင်ဆင်ရာတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ဖိနှိပ်ခြင်း" အမည်ရသည့် သတင်းဇာတ်လမ်းတို တစ်စောင်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။  ဂါးဒီးယန်း၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှု အရ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ စီစဉ်သူများ အတွက် ခမ်းနားကြီးကျယ်သော ရုံးခန်းများကို တည်ဆောက်ပေးနေရသည့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသည် တစ်နှစ်ကျော်မျှ လစာ မရရှိဘဲ ယခု အခါတွင် ပိုးဟပ်များ ပြည့်နှက်နေသည့် အဆောင်များတွင် နေထိုင်၍ တရားမဝင် အလုပ်လုပ်နေရသည်ကို အစီရင်ခံ ဖော်ပြထားသည်။  ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေသည့် နီပေါ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများမှာ ၂ ရက်လျှင် တစ်ယောက်နှုန်း သေဆုံးခဲ့သည်။ ကာတာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီမှ အမျိုးမျိုးသော စွပ်စွဲမှုများ အတွက် တုံ့ပြန်သည်မှာ ကာတာတွင် ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကျင်းပ ခြင်းသည် ဒေသအတွင်း အပြောင်းအလဲများကို လျှင်မြန်စွာ ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အထောက်အပံ့ တစ်ခုဖြစ်သည် ဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။ 
ဘောလုံးသည် ရေပန်း အစားဆုံး ကစားနည်း ဖြစ်သော်လည်း အခြားသော အဖွဲ့လိုက် ကစားနည်းများမှာလည်း အတော်အတန် အောင်မြင်မှုများ ရှိသည်။ ၂၀၁၅ တွင် အိမ်ရှင် အဖြစ်လက်ခံ ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့ ဟန်းဘော ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲတွင် ကာတာ ဟန်းဘော အသင်းသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ နောက် ဒုတိယ နေရာမှ လိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပြိုင်ပွဲမှာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံနှင့် အိမ်ရှင်အသင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာ အများအပြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။  ထို့ပြင် ၂၀၁၄တွင်ပင် ကာတာသည် ၃x၃ ဘတ်စကက်ဘော ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲတွင် အမျိုးသား အသင်းမှ ချန်ပီယံဆု ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့သည်။ 
ဒိုဟာတွင် ရှိသော ခါလီဖာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တင်းနစ် နှင့် စကွက်ရှ် အားကစားရုံတွင် ၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၀ အထိ အမျိုးသမီး တင်းနစ် အသင်း (ဒဗလျူတီအေ) ၏ လှည့်လည် ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲကို လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ကာတာသည် အမျိုးသမီး တင်းနစ် အသင်း၏ အထူးတန်းပြိုင်ပွဲဖြစ်သော ကာတာ လေဒီ အိုးပင်း ပြိုင်ပွဲကို နှစ်စဉ် ကျင်းပသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစ၍ ကာတာသည် နှစ်စဉ် တိုးရ်အော့ဖ်ကာတာ အမည်ရသော အဆင့်ခြောက်ဆင့် စက်ဘီးစီး ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပလေ့ ရှိသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတိုင်းတွင် စက်ဘီးနင်းသူများသည် ကာတာ၏ မြေပြန့်ပေါ်တွင် ၆ ရက်ကြာမျှ စီးနင်း ရသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အချိန်နှင့် ပြိုင်ရသော ပြိုင်ပွဲများတွင် ခရီးစဉ် တိုတောင်းသော်လည်း ထိုပြိုင်ပွဲ၏ အဆင့်တိုင်းသည် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကျော် ရှိသည်။ တိုးရ်အော့ဖ်ကာတာကို ကာတာ စက်ဘီးစီး အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပပြီး ကြေးစား စက်ဘီးစီး သမားများ၏ အီလစ်မန်း အဆင့်အတွက် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ကာတာစစ်တပ်၏ လေထီးခုန် အသင်းသည် လေထီးခုန်နည်း အချို့၌ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ထိပ်တန်း အဆင့်တွင် ပါဝင်သည်။ ကာတာ အမျိုးသား လေထီး အသင်းသည် နှစ်စဉ် ကာတာ အမျိုးသားနေ့ နှင့် ၂၀၁၅ ဟန်းဘော ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲကဲ့သို့သော အခြားကြီးမားသော ပွဲများ ၌ သရုပ်ပြလေ့ရှိသည်။ ဒိုဟာသည် အက်ဖ်အိုင်ဗွီဘီ ဘောလီဘော အမျိုးသား ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲကို လေးကြိမ်တိုင် အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီး အက်ဖ်အိုင်ဗွီဘီ ဘောလီဘော အမျိုးသမီး ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲကို ၃ ကြိမ်တိုင် အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ဒိုဟာသည် အာရှ ဘော်လီဘော ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင် အဖြစ် တစ်ကြိမ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ဖူးသည်။
ကာတာ တက္ကသိုလ်၏ အရှေ့ဘက်မြင်ကွင်း
ကာတာသည် ရန်း(RAND) ကော်ပိုရေးရှင်းကို ငှားရမ်း၍ ၎င်း၏ ၁၂ တန်း ပညာရေး စနစ်ကို ပြုပြင်စေခဲ့သည်။ ကာတာဖောင်ဒေးရှင်းမှ တဆင့် ပညာရေးမြို့တော် ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ထိုတက္ကသိုလ်ဝန်း အတွင်းတွင် ဝေးလ်ကော်နဲလ် ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ကာနဲဂျီမီလွန် ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံကျောင်း၊ ဂျော့ရှ်တောင်း တက္ကသိုလ် ဖောရိန်းဆားဗစ်ကျောင်း၊ နော့သ်ဝက်စတန် မီဒေးလ် သတင်းစာပညာကျောင်း၊ တက္ကဆပ် အေအင်န်အမ် အင်ဂျင်နီယာကျောင်း နှင့် အခြား အနောက်တိုင်း တက္ကသိုလ်များ၏ ကျောင်းခွဲများကို လက်ခံနေရာချထားပေးခဲ့သည်။
ယူနက်စကို စာရင်းအင်း အင်စတီကျု၊ ကာတာလူဦးရေနှင့် စာတတ်မြောက်မှု အပေါင်း ၅ ၁၉၈၅-၂၀၁၅
ကာတာ၏ စာမတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ ၂၀၁၂တွင် အမျိုးသား ၃.၁% နှင့် အမျိုးသမီး ၄.၂% တို့ ဖြစ်ကြပြီး အာရပ်စကားပြော နိုင်ငံများတွင် အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်သော်လည်း တကမ္ဘာလုံးတွင် အဆင့် ၈၆ မျှသာ ရှိသည်။  နိုင်ငံသားများသည် အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ပေးသော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် မူကြိုမှ အထက်တန်း အထိ တက်ရောက်ရန် လိုအပ်သည်။  ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ကာတာ တက္ကသိုလ်သည် နိုင်ငံ အတွင်း အဆင့်မြင့် ပညာရေး အတွက် ရှေးအကျဆုံး နှင့် အကြီးဆုံး တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အီမာစော်ဘွား ဟာမက် ဘင် ခါလီဖာ ဘင် ခါလီဖာ အယ်လ်သာနီမှာ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။  ထိုကောင်စီမှ မူကြို အဆင့်မှ တက္ကသိုလအထိ ပညာရေး အားလုံးကို လမ်းညွှန် ထိန်းချုပ်ပြီး ထိုအထဲတွင် "ခေတ်သစ် အတွက် ပညာရေး" ဟု အမည်ရသော ကာတာအား ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ဖြစ်ရန် အစပျိုး တီထွင် ဆောင်ရွက်မှုလည်း ပါဝင်သည်။. ဝီဘိုမက်ထရစ်၏ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်များ၏ အဆင့်မှာ ကာတာ တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၁,၈၈၁)၊ ကာတာ တက္ကဆပ် အေအင်န်အမ် တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၃,၉၀၅) နှင့် ကာတာ ဝေးလ်ကော်နဲလ် ဆေးတက္ကသိုလ် (အဆင့် ၆,၈၅၅) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကာတာသည် ကာတာ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ရပ်ဝန်း ကို ပညာရေး မြို့တော် အတွင်း တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုတက္ကသိုလ်များနှင့် လုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။ ပညာရေး မြို့တော်သည် အပြည့်အဝ အသိအမှတ် ပြုခံရသော နိုင်ငံတကာ ဘာကာလောရီရိတ် အထက်တန်းကျောင်း ကာတာ အကယ်ဒမီ တည်ရှိရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကနေဒါ တက္ကသိုလ် နှစ်ခု ဖြစ်သော မြောက်အတ္တလန္တိတ် ကောလိပ် (နယူးဖောင်လန် နှင့် လာဘရာဒေါတွင် ဌာနချုပ် ရှိသည်။) နှင့် ကဲလ်ဂရီ တက္ကသိုလ် တို့လည်း ဒိုဟာတွင် တက္ကသိုလ် နယ်မြေ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အခြားသော အကျိုးစီးပွားအတွက် ဦးတည်သည့် တက္ကသိုလ်များလည်း ကာတာတွင် လာရောက် ဖွင့်လှစ်ကြသည်။ ၂၀၀၉တွင် ရှိတ်အမျိုးသမီးစော်ဘွား မိုဇာ အယ်လ် မစ်စ်နက်၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်၌ ကမ္ဘာ့ ပညာရေး တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ထိပ်သီးဌာန (World Innovation Summit for Education သို့ WISE) ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ပညာရေးကို တီထွင် ဆန်းသစ်မှုဖြင့် ပြောင်းလဲပစ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
ကာတာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ အမြင့်ဆုံး ရှိသော်လည်း ၂၀၁၂ ပီအိုင်အက်စ်အေ စာမေးပွဲ ၁၅ နှစ် နှင့် ၁၆ နှစ်သားတို့အတွက် အဖတ်စွမ်းရည် ပြိုင်ပွဲတွင် အိုအီးစီဒီ နိုင်ငံ ၆၅ နိုင်ငံ၌ အောက်ဆုံးမှစ၍ ရေတွက်လျှင် တတိယ နေရာသို့ ရောက်ခဲ့သဖြင့် ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံ သို့ အယ်လ်ဘေးနီးယား နိုင်ငံ နှင့် အဆင့်တူပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ အရ ကာတာသည် ၁၀ နှစ် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းကို ရေးဆွဲပြီး ပညာရေး အဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းလျှက် ရှိသည်။ထို့ပြင် အစိုးရမှ အယ်လ် ဘိုင်ရပ် ကဲ့သို့သော ပညာရေး ဖြန့်ကျက်မှု အစီအစဉ်များကို စတင်ခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘိုင်ရပ်အား ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး အထက်တန်းကျောင်းသားများအား ကာတာ တက္ကသိုလ်၏ အဆင့်မြင့်ကုန်ကြမ်းဌာနတွင် သုတေသန ပတ်ဝန်းကျင် အတွေ့အကြုံ ရရှိစေရန် အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် STEM နယ်ပယ် (သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် သင်္ချာ) နှင့် ဘာသာစကား နယ်ပယ်များ ပါဝင်သည်။
US State Dept's Country Political Profile - Qatar။
Gardener၊ David။ "Qatar shows how to manageamodern monarchy"၊ Financial Times။
"The World Factbook"၊ CIA Factbook။
"Canada – Qatar Bilateral Relations"၊ Government of Canada။
IFES Election Guide - Elections: Qatar Referendum Apr 29 2003။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar 2003။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Population of Qatar by nationality - 2017 report။7February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Indices & Data | Human Development Reports။ United Nations Development Programme (14 March 2013)။ 12 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar human development။
Dagher၊ Sam။ "Tiny Kingdom's Huge Role in Libya Draws Concern"၊ Online.wsj.com၊ 17 October 2011။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar: Rise of an Underdog။ Politicsandpolicy.org။ 10 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Ian Black in Tripoli။ Qatar admits sending hundreds of troops to support Libya rebels။ Theguardian.com။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Cooper၊ Andrew F.။ Middle Powers: Squeezed out or Adaptive?။ Public Diplomacy Magazine။ 29 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kamrava၊ Mehran။ Mediation and Qatari Foreign Policy။7October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Paul Rhys in Doha။ Blatter reaches out to Arabia။ Aljazeera.com။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Casey၊ Paula; Vine၊ Peter (1992)။ The heritage of Qatar။ Immel Publishing။ p. 17။
History of Qatar။ Qatar Statistics Authority။6June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Maps။ Qatar National Library။6June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
About us။ Katara။ 11 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hazlitt၊ William (1851)။ The Classical Gazetteer: A Dictionary of Ancient Geography, Sacred and Profane။ Whittaker & co.။
Toth, Anthony. "Qatar: Historical Background." A Country Study: Qatar (Helen Chapin Metz, editor). Library of Congress Federal Research Division (January 1993). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
Khalifa၊ Haya; Rice၊ Michael (1986)။ Bahrain Through the Ages: The Archaeology။ Routledge။ pp. 79, 215။ ISBN 978-0710301123။
History of Qatar။ Ministry of Foreign Affairs. Qatar. London: Stacey International, 2000။9January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Rice၊ Michael (1994)။ Archaeology of the Persian Gulf။ Routledge။ pp. 206, 232–233။ ISBN 978-0415032681။
Magee၊ Peter (2014)။ The Archaeology of Prehistoric Arabia။ Cambridge Press။ pp. 50, 178။ ISBN 9780521862318။
Sterman၊ Baruch (2012)။ Rarest Blue: The Remarkable Story Of An Ancient Color Lost To History And Rediscovered။ Lyons Press။ pp. 21–22။ ISBN 978-0762782222။
Cadène၊ Philippe (2013)။ Atlas of the Gulf States။ BRILL။ p. 10။ ISBN 978-9004245600။
Qatar – Early history။ globalsecurity.org။ 17 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gillman၊ Ian; Klimkeit၊ Hans-Joachim (1999)။ Christians in Asia Before 1500။ University of Michigan Press။ pp. 87, 121။ ISBN 978-0472110407။
Commins၊ David (2012)။ The Gulf States: A Modern History။ I. B. Tauris။ p. 16။ ISBN 978-1848852785။
Habibur Rahman, p. 33
AUB academics awarded $850,000 grant for project on the Syriac writers of Qatar in the 7th century AD။ American University of Beirut (31 May 2011)။ 12 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kozah၊ Mario; Abu-Husayn၊ Abdulrahim; Al-Murikhi၊ Saif Shaheen (2014)။ The Syriac Writers of Qatar in the Seventh Century။ Gorgias Press LLC။ p. 24။ ISBN 978-1463203559။
Bahrain။ maritimeheritage.org။ 17 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Fromherz၊ Allen (13 April 2012)။ Qatar: A Modern History။ Georgetown University Press။ pp. 44, 60, 98။ ISBN 978-1-58901-910-2။
Rahman၊ Habibur (2006)။ The Emergence Of Qatar။ Routledge။ p. 34။ ISBN 978-0710312136။
A political chronology of the Middle East။ Routledge / Europa Publications။ 2001။ p. 192။ ISBN 978-1857431155။
Page၊ Kogan (2004)။ Middle East Review 2003–04: The Economic and Business Report။ Kogan Page Ltd။ p. 169။ ISBN 978-0749440664။
Qatar, 2012 (The Report: Qatar)။ Oxford Business Group။ 2012။ p. 233။ ISBN 978-1907065682။
Casey၊ Paula; Vine၊ Peter (1992)။ The heritage of Qatar။ Immel Publishing။ pp. 184–185။
Russell၊ Malcolm (2014)။ The Middle East and South Asia 2014။ Rowman & Littlefield Publishers။ p. 151။ ISBN 978-1475812350။
History။ qatarembassy.net။ 17 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Larsen၊ Curtis (1984)။ Life and Land Use on the Bahrain Islands: The Geoarchaeology of an Ancient Society (Prehistoric Archeology and Ecology series)။ University of Chicago Press။ p. 54။ ISBN 978-0226469065။
Althani၊ Mohamed (2013)။ Jassim the Leader: Founder of Qatar။ Profile Books။ p. 16။ ISBN 978-1781250709။
Gillespie၊ Carol Ann (2002)။ Bahrain (Modern World Nations)။ Chelsea House Publications။ p. 31။ ISBN 978-0791067796။
Anscombe၊ Frederick (1997)။ The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudia Arabia, and Qatar။ Columbia University Press။ p. 12။ ISBN 978-0231108393။
Potter၊ Lawrence (2010)။ The Persian Gulf in History။ Palgrave Macmillan။ p. 262။ ISBN 978-0230612822။
Heard-Bey၊ Frauke (2008)။ From Tribe to State. The Transformation of Political Structure in Five States of the GCC။ p. 39။ ISBN 978-88-8311-602-5။
'Gazetteer of the Persian Gulf. Vol I. Historical. Part IA & IB. J G Lorimer. 1915'  (1155/1782), p. 1001
Crystal၊ Jill (1995)။ Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar။ Cambridge University Press။ p. 27။ ISBN 978-0521466356။
Casey၊ Michael S. (2007)။ The History of Kuwait (The Greenwood Histories of the Modern Nations)။ Greenwood။ pp. 37–38။ ISBN 978-0313340734။
'Gazetteer of the Persian Gulf. Vol I. Historical. Part IA & IB. J G Lorimer. 1915' [843 (998/1782)]။ qdl.qa။ 13 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar။ Teachmideast.org။ 27 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kursun၊ Zekeriya (2004)။ Katar'da Osmanlilar 1871–1916။ Turk Tarih Kurumu။
"Review of The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudi Arabia and Qatar by Frederick F. Anscombe; The Blood-Red Arab Flag: An Investigation into Qasimi Piracy, 1797–1820 by Charles E. Davies; The Politics of Regional Trade in Iraq, Arabia and the Gulf, 1745–1900 by Hala Fattah" (November 1999). British Journal of Middle Eastern Studies 26 (2): 339–342. doi:10.1080/13530199908705688.
Habibur Rahman, pgs.143–144
Habibur Rahman, pgs.150–151
Habibur Rahman, p. 152
Battle of Al Wajbah။ Qatar Visitor (2 June 2007)။ 17 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Amiri Diwan – Shaikh Abdullah Bin Jassim Al Thani။ Diwan.gov.qa။ 10 February 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Exchange of Notes constituting an Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Kuwait regarding relations between the United ... Exchange of Notes concerning the Termination of Special Treaty Relations ... Northern Ireland and the State of Qatar,3September 1971
"New Qatari emir Sheikh Tamim 'set to announce reshuffle'"၊ BBC News၊ 26 June 2013။ 26 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
nouvelobs.com: "Qatar : "S'ils pouvaient, ils achèteraient la Tour Eiffel",7April 2013
Qatar (01/10)။ State.gov။ 28 March 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Coman, Julian။ "Egyptian Suicide Bomber Blamed for Attack in Qatar"၊ The Independent၊ 21 March 2005။
Analytica၊ Oxford။ "The Advent of Terrorism in Qatar"၊ Forbes၊ 25 March 2005။
"Qatar Timeline"၊ BBC News၊ 14 June 2012။7January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Qatar bankrolls Syrian revolt with cash and arms"၊ 16 May 2013။3June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Nordland၊ Rod။ "In Surprise, Emir of Qatar Plans to Abdicate, Handing Power to Son"၊ 24 June 2013။ 26 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"The World factbook"၊ CIA.Gov၊ 20 June 2014။ 20 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Saudi-led coalition strikes rebels in Yemen, inflaming tensions in region". CNN. 27 March 2015.
Saudi Arabia and Bahrain break diplomatic ties with Qatar over 'terrorism'။ The Guardian။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
BBC NEWS - Middle East - How democratic is the Middle East?။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar။ CIA World Factbook။ Central Intelligence Agency (8 February 2012)။4March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Lambert, Jennifer (2011). "Political Reform in Qatar: Participation, Legitimacy and Security" 19 (1). Middle East Policy Council.
"Qatar to hold advisory council elections in 2013"၊ Reuters (UK edition)၊ Reuters၊ 1 November 2011။4March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Qatari emir Sheikh Hamad hands power to son Tamim"၊ 25 June 2013။ 25 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Legislative elections in Qatar postponed until at least 2019" (in en-US)၊ Doha News၊ 2016-06-17။
The People Want Reform… In Qatar, Too.။ Jadaliyya။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Permanent Constitution of the State of Qatar။ Government of Qatar။
Constitution of Qatar။ “According to Article 1: Qatar is an independent Arab country. Islam is its religion and Sharia law is the main source of its legislation.”
The World Factbook။ U.S. Central Intelligence Agency။
Qatar။ US Department of State။
Qatar Gender Equality Profile။ UNICEF။
Amnesty International Annual Report 2012 – Qatar။ Amnesty International။ 19 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Filipino woman gets 100 lashes for giving birth in Qatar။
Qatar။ Amnesty International။
"Annual Report"၊ Amnesty International၊ 23 October 2014။
Qatar sentences man to 40 lashes for drinking alcohol။ Arabian Business။
Qatar sentences man to lashes for drinking alcohol။ Al Akhbar။
Qatar court orders lashing of Muslim barber over drinking alcohol။ Al Arabiya။
Indian expat sentenced to 40 lashes in Qatar for drink-driving။ Arabian Business။
Special report: The punishment was death by stoning. The crime? Havingamobile phone။
Jenifer Fenton။ "Religious law, prison for "blasphemy", severe sexual inequalilty: Qatar's human rights review"။
What are the worst countries in the world to be gay?။
Alex Delmar-Morgan။ "Qatar, Unveiling Tensions, Suspends Sale of Alcohol"၊ Wall Street Journal၊7January 2012။ 17 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Jenifer Fenton။ "Qatar's Impromptu Alcohol Ban"၊ The Arabist၊ 16 January 2012။ 17 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar Distribution Company။ Qatar Loving။
Purchasing Alcohol in Qatar။ Qatar Visitor (2 June 2007)။ 1 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Walid၊ Tamara။ "Qatar would 'welcome' Israel in 2022"၊ 11 November 2009။ 10 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
James M. Dorsey။ "Debate Questions Emir's Powers To Shape Qatar's Positioning As Sports Hub And Sponsor of Revolts – Analysis"၊ The Eurasia Review၊ 17 January 2012။ 17 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Elgot၊ Jessica။ "'Leggings Are Not Pants' Qatar's New Modesty Campaign Aimed At Westerners'"၊ 28 May 2014။
Aningtias Jatmika (29 May 2014)။ Qatar Bans Tourists from Wearing Leggings in Public။
"Country Narratives"။ Human Trafficking Report 2011။ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, United States Department of State။ June 2011။ 21 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"The UN Committee against Torture: Human Rights Monitoring and the Legal Recognition of Cruelty" (2009). Human Rights Quarterly 313 (3): 777–800. doi:10.1353/hrq.0.0094.
Conclusions and Recommendations: Qatar (အစီရင်ခံစာ)။ UN Committee Against Torture။ 25 July 2006။ U.N. Doc. CAT/C/QAT/CO/1။9January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "Certain provisions of the Criminal Code allow punishments such as flogging and stoning to be imposed as criminal sanctions by judicial and administrative authorities. These practices constituteabreach of the obligations imposed by the Convention. The Committee notes with interest that authorities are presently considering amendments to the Prison Act that would abolish flogging." (Par. 12)
Death penalties in the world -Qatar (2014)။
LGBT relationships are illegal in 74 countries, research finds။ The Independent (17 May 2016)။
International unions warn Qatar's work visa system allows employers to use forced labour။ ITUC-CSI-IGB။
Owen Gibson (14 May 2014)။ Qatar government admits almost 1,000 fatalities among migrants။
Qatar to allow trade union, scrap 'sponsor' system။ Al Arabiya (1 May 2012)။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wilson၊ Nigel (21 July 2014)။ Qatar Announces New Labour Law Reforms Amid Workers' Rights Outcry။ International Business Times။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Walker၊ Lesley (15 January 2015)။ Firms in Qatar who fail to pay workers on time could face suspensions။ Doha News။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Peter Kovessy (27 October 2015)။ Qatar’s Emir signs into law kafala changes (updated)။ Doha News။
Qatar’s inaction on labor reforma'human rights disaster', Amnesty။ RT။ Russia Today (1 December 2015)။
Qatar: New reforms Won't Protect Migrant Workers။ Human Rights Watch (8 November 2015)။
Chris Arsenault (28 October 2015)။ Qatar complicit in 'modern slavery' despite reforms – unions။ Reuters။
Miles၊ Hugh (2005)။ Al-Jazeera။
"Qatar IsaU.S. Ally. They Also Knowingly Abet Terrorism. What's Going On?" (6 October 2014). New Republic. Retrieved on7October 2014. “Two overarching goals have driven Qatari policy. One has been to maximize Qatar's influence on the regional and international stage. This originally reflected the personal ambition of the former ruler and current emir's father, Shaykh Hamad bin Khalifa al Thani, and his foreign minister and eventual prime minister, Shaykh Hamad bin Jassim al Thani. The two men directed foreign policy until the father abdicated in favor of his son, Emir Tamim bin Hamad al Thani, in July 2013. The second objective has been to preserve the security of the ruling family and state.”
H Rahman (2005)။ The Emergence of Qatar။ Routledge။ ISBN 978-0-7103-1213-6။ 26 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar relies on US base amid Gulf tensions။ FT.com။ 16 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Zacharia၊ Janine။ "For Qatar, relations with West areabalancing act"၊ New York Times၊4March 2008။ 30 January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"How Tiny Qatar 'Punches Above Its Weight'"၊ NPR၊ 23 December 2013။5June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Taking Outsize Role in Syria, Qatar Funnels Arms to Rebels"၊ New York Times၊ 30 June 2013။ 21 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar and Saudi Arabia sign defense agreement။ Tehrantimes.com (25 February 2010)။2October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Qatar recognizes Libyan rebels after oil deal"၊ Al Jazeera၊ 28 March 2011။ 29 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Qatar's Support of Islamists Alienates Allies Near and Far"၊ The New York Times၊7September 2014။5June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Islam Hassan (31 March 2015)။ GCC's 2014 Crisis: Causes, Issues and Solutions။ Al Jazeera Research Center။4June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Saudi Arabia uses terrorism as an excuse for human rights abuses။ Al Jazeera America (December 3, 2015)။
Jay Solomon (10 October 2014)၊ U.S.-Qatar Alliance Strains Coalition Against Islamic State၊ Wall Street Journal
John Defterios (27 October 2014)။ CNN ISIS: Can coalition cut off funding of world's wealthiest terror group?။
Kim Sengupta။ "Turkey and Saudi Arabia alarm the West by backing Islamist extremists the Americans had bombed in Syria"၊ 12 May 2015။
"Gulf allies and 'Army of Conquest'". Al-Ahram Weekly. 28 May 2015.
The Daily Beast။ Qatar Sends Aid Money to Help Egypt။ TheDailyBeast.com။4November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Al-Jazeera Effect။ Foreign Policy (9 February 2011)။
Reuters။ Egypt Returns $2 Billion to Qatar in Sign of Growing Tensions။ Voanews.com။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
bbc.com: "Hamas political leaders leave Syria for Egypt and Qatar", 28 February 2012
Gaza conflict spotlights role of Qatar, the Hamas-funding U.S. ally (28 July 2014)။ 30 July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Al Attiyah to CNN: Israel doesn't want peace (28 July 2014)။ 26 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar pledges $1 billion for Gaza rebuilding at Cairo conference (12 October 2014)။ 26 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Enriching the Middle East's Economic Future Conferences။ Qatar Conferences။ 30 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sudan Minister Lauds Doha Declaration For Initiating Darfur Peace Process။ Qatar Chronicle (9 June 2013)။ 24 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar donates $88.5 Million for Darfur (24 September 2014)။ 21 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Saudi Arabia, UAE, Egypt and Bahrain break diplomatic ties with Qatar over 'terrorism'"၊ The Guardian၊5June 2017။
"Six nations cut diplomatic ties to Qatar as Arab rift deepens"၊ Hurriyet Ddaily News၊5June 2017။
"Yemen cuts diplomatic ties with Qatar: state news agency"၊ reuters၊5June 2017။
The SIPRI Military Expenditure Database။ Stockholm International Peace Research Institute။ 23 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Strange Power of Qatar by Hugh Eakin။ The New York Review of Books။ 16 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Trends in International Arms Transfer, 2014။ Stockholm International Peace Research Institute။ 19 March 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Yemen crisis: Who is fighting whom? (28 March 2017)။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Airstrike Hits Doctors Without Borders Hospital in Yemen။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Yemen conflict: MSF hospital destroyed by air strikes (27 October 2015)။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar Municipalities။ Qatar Ministry of Municipality and Urban Planning။ 22 December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Administrative Division of the State။ The General Census of Population and Housing, and Establishment Apr 2010။ State of Qatar Statistics Authority။
Population By Gender, Municipality And Zone, March 2004။ General Secretariat for Development Planning။ 12 December 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
List of Parties။ Convention on Biological Diversity။ 8 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
National Biodiversity Strategy and Action Plan. State of Qatar။ Convention on Biological Diversity။9December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
A. H. Moubasher (1993)။ Soil Fungi in Qatar and Other Arab Countries။ Centre for Scientific and Applied Research, University of Qatar။ p. i–xvi, 570 pp., 86 plates။ ISBN 978-99921-21-02-3။
The Lizards Living in Qatar. 2014. First edition, Published in Doha (Qatar), 2014,5June (World Environment Day). 570 pages. Archived 8 July 2014 at the Wayback Machine.
CO2 emissions (metric tons per capita)။ Data.worldbank.org။7January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pearce၊ Fred။ "Qatar to use biofuels? What about the country's energy consumption?"၊ The Guardian၊ 14 January 2010။
Qatar National Vision 2030။ Ministry of Development Planning and Statistics။ 13 November 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Rasoul Sorkhabi (2010)။ The Qatar Oil Discoveries။
Nordland၊ Rod။ "New Hope for Democracy inaDynastic Land"၊ NYTimes.com၊ 25 June 2013။ 26 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Report for Selected Countries and Subjects (PPP valuation of country GDP)။ IMF (October 2016)။
Bill Crane (20 April 2015). Gravediggers of the Gulf. Jacobin. Retrieved 20 April 2015.
Qatar: Migrant Construction Workers Face Abuse။ Human Rights Watch။
Robert Tuttle (22 May 2014). World Cup Host Qatar Ranked Among Worst Places to Work by Unions. Bloomberg. Retrieved 29 July 2014.
Qatar tourist guide။ 14 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Doing Business in Qatar: 2012 Country Commercial Guide for U.S. Companies။ US & Foreign Commercial Service And US Department of State။ 16 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar။ OPEC။6June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The World's Richest Countries။ Forbes။
Kortekaas၊ Vanessa (28 October 2013)။ New Qatar emir shakes up sovereign wealth fund။ Financial Times။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar Holding LLC Among Investors in BlackBerrys $1 Billion Convertible Debt။ Berryreview.com (6 November 2013)။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hall၊ Camilla (30 October 2013)။ Qatar fund quietly builds $1bn Bank of America stake။ Financial Times။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hall၊ Camilla (4 July 2013)။ Qatar: what's next for the world's most aggressive deal hunter?။ Financial Times။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Taxes on junk food, luxury items to be rolled out in Qatar soon (16 February 2017)။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
layoffs Archives - Doha News။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Simon Lincoln Reader (12 November 2013)။ Qatar shows how money can solve most problems။ Bdlive.co.za။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
History of Census in Qatar။ Qatar Statistics Authority။ 11 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Populations။ Qsa.gov.qa။2October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Population structure။ Qatar Statistics Authority (31 January 2013)။6October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Qatar's delicate balancing act"၊ BBC News၊ 16 January 2013။ 23 May 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar population hits 2.5 million on worker influx - People | Tengrinews
Pandit၊ Mobin (5 January 2013)။ Population rise will push up rents။ The Peninsula Qatar။
Though many leave Qatar, there are more people here than ever။ Doha News။ 17 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Global Religious Landscape. Pew Forum.
Population By Religion, Gender And Municipality March 2004။ Qatar Statistics Authority။ 18 May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Report on International Religious Freedom – Qatar။ US Department of State။ 21 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The official state religion follows the conservative Wahhabi tradition of the Hanbali school of Islam”
Tiny Qatar's growing global clout။ BBC (30 April 2011)။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Qatar's modern future rubs up against conservative traditions"၊ Reuters၊ 27 September 2012။
"Rising power Qatar stirs unease among some Mideast neighbors"၊ Reuters၊ 12 February 2013။ 13 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
2011 Report on International Religious Freedom – Qatar။ US Department of State။
Christians to Welcome Qatar's First Christian Church။ Christianpost.com (24 February 2008)။ 22 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
CIA The World Fact Book။ State.gov (29 June 2006)။ 28 March 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Report on Qatar။ Cumorah Project။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Anglican Centre in Qatar။ Epiphany-qatar.org။ 16 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
David B. Barrett; George Thomas Kurian; Todd M. Johnson (2001)။ World Christian encyclopedia:acomparative survey of churches and religions in the modern world။ 1။ Oxford University Press။ p. 617။ ISBN 978-0-19-510318-2။
Baker၊ Colin; Jones၊ Sylvia Prys (1998)။ Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education။ Multilingual Matters။ p. 429။ ISBN 978-1853593628။
Guttenplan၊ D. D.။ "Battling to Preserve Arabic From English's Onslaught"၊ The New York Times၊ 11 June 2012။ 24 November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar Facts။ First Qatar Orthodontic Conference။ 12 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Jacot၊ Martine (23 December 2013)။ Le Qatar ne paie pas ses contributions à la francophonie။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Clément Duhaime : "Le Qatar n'a pas tenu ses promesses" à l'OIF - JeuneAfrique.com (22 April 2015)။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kamrava၊ Mehran (2013)။ Qatar: Small State, Big Politics။ Cornell University Press။ ISBN 978-0801452093။
Qatar National Day 2011။ Time Out Doha (29 November 2011)။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Everything you need to know about Qatar National Day 2012။ Doha News (10 December 2012)။ 18 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Art in Qatar: A Smithsonian in the sand"၊ The Economist၊ 1 January 2011။ 16 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
QMA Board of Trustees။ Qatar Museums Authority။2April 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar revealed as the world's biggest contemporary art buyer။ The Art Newspaper။7March 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Bohas၊ Alexander။ The Political Trump-Cards of Cultural Potency Qatar's Policy of 'Cultural Grandeur'။ Chaos International။ 13 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar Freedom of the Press။ Freedom House။ 19 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Barrie Gunter; Roger Dickinson (6 June 2013)။ News Media in the Arab World: A Study of 10 Arab and Muslim Countries။ A&C Black။ p. 33။ ISBN 1-4411-0239-6။ 8 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Blanchard၊ Christoper (2014)။ Qatar: Background and U.S. Relations။ Congressional Research Service။ p. 17။
Roth၊ Richard J.။ "AwaitingaModern Press Law in Qatar"၊ New York Times၊ 8 May 2013။ 16 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
New cybercrime law could have serious consequences for press freedom in Qatar။ cpj.org (27 September 2014)။ 19 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar: New Cyber Crime Law poses real threat to Freedom of Expression။ gc4hr.org (17 September 2014)။ 19 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Report: Qatar 2010။ Oxford Business Group။ 2010။ p. 237။
NRI Overall Ranking 2014။ World Economic Forum။ 28 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Arts and Culture။ Embassy of Qatar in London။ 25 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Heritage and Culture။ Qatar e-Gov။ 26 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar –aSporting Nation။ Qatar e-Government။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Fox Sports brings you everything you need to know – andafew things you don't – about the Asian Cup။ Fox Sports (4 January 2011)။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Paul Radford။ "Russia, Qatar win 2018 and 2022 World Cups"၊2December 2010။2December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Europe's Top Leagues protest against 2022 winter World Cup in Qatar။ Qatar Chronicle (12 August 2013)။ 17 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Fifa wants Qatar 2022 postponed to Winter"၊ Qatar Chronicle၊ 20 July 2013။ 21 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 November 2014။
BBC Sport – Qatar World Cup: '£3m payments to officials' corruption claim။ Bbc.co.uk။ 1 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
World Cup inquiry clears Qatar but criticises English FA။ BBC (13 November 2014)။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pattisson၊ Pete။ "Revealed: Qatar's World Cup 'slaves'"၊ 25 September 2013။ 26 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "So entrenched is this exploitation that the Nepalese ambassador to Qatar, Maya Kumari Sharma, recently described the emirate as an "open jail"."
Qatar World Cup: migrants waitayear to be paid for building offices။ The Guardian (28 July 2014)။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Owen Gibson and Pete Pattisson (23 December 2014). Death toll among Qatar's 2022 World Cup workers revealed. The Guardian. Retrieved 29 May 2015.
Gibson၊ Owen (14 June 2014)။ Qatar hits back at allegations of bribery over 2022 World Cup။ The Guardian.။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Match report။ International Handball Federation။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
2014 FIBA 3x3 World Championships။ International Basketball Federation။ 31 October 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The homepage of Tour of Qatar။ Letour.fr (1 December 1994)။ 22 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gay၊ Chris။ Skydive Mag - Incredible Demo at Doha။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
In the occasion of Literacy Arab Day, Qatar has the Lowest Illiteracy Rates in 2012။ Qatar Statistics Authority (8 January 2013)။ 24 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar constitution။ 18 September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Our history။ Qatar University။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hendengren၊ Adam (25 June 2013)။ SPECIAL REPORT: UNIVERSITY STUDIES IN THE MIDDLE EAST။ Your Middle East။ 12 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
World Data on Education – Qatar။ UNESCO။ 21 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"National student research fairs as evidence for progress in Qatar’s Education foraNew Era" (1 November 2010). Improving Schools 13 (3): 235–248. doi:10.1177/1365480210390083. Retrieved on5June 2017.
Education foraNew Era။ Supreme Education Council။ 13 September 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 March 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Qatar။ Ranking Web of Universities။ 26 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
PISA 2012 Results in Focus။ OECD။ 2014။ p. 5။
Key findings – Organisation for Economic Co-operation and Development။ Oecd.org။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Welcome to Al-Bairaq World။ Qu.edu.qa (6 March 2014)။ 19 April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။